ဆုံခဲ့ဖူးတဲ့ … တစ်ညတာ – Grab Love Story
အာင် … ရေသွားကူးမယ်လေကွာ … ကောင်မလေးတွေက အရမ်းလန်းတယ်ကွ … ဟေ့ကောင် ဘာငိုင်နေတာလဲ”
သက်နိုင် … ဘန်ဂလိုထဲကနေ … ပင်လယ်ပြင်ကို တစ်ယောက်ထဲ ငေးနေတုန်း … သူငယ်ချင်းရဲနိုင်က လှမ်းခေါ်သည် …
“မင်းကွာ … ဒီကမ်းခြေမှာ … ကောင်မလေးနှစ်ယောက်လောက် ရနိုင်တဲ့ဟာကို … ငိုင်နေရတယ်လို့”
သက်နိုင် … မျက်နှာ နီရဲနေတဲ့ ရဲနိုင်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်သည် … နီမှာပေါ့ … ဘီယာ နှစ်ပုလင်းလောက် ကစ်ထားတယ် ထင်တယ် …
“ဒါဆိုလည်း … ငါ့အတွက် နှစ်ယောက်ခေါ်လာခဲ့လေ … ဟား ဟား ဟား”
သက်နိုင်နဲ့ … ရဲနိုင် … ချောင်းသာကို မနေ့ကမနက်က ရောက်တယ် … သက်နိုင်က လူအေး … တစ်ချိန်လုံး ဘန်ဂလိုထဲမှာ အောင်းနေသည် … ရဲနိုင်က … လူသွက် … ရောက်ကတည်းက … ကမ်းခြေထဲ ဆင်းသွားလိုက် … ဘီယာမော့လိုက် … ဟုတ်နေတာပဲ … ညဘက် … ရေကူးကန်ဘေးမှာ ကနေတုန်း … ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ … ညိတိတိ ဖြစ်လာသေးသည် … သက်နိုင်ဆိုတဲ့ကောင်က … အခုထိကို မစွံပါဘူး … ကောင်မလေးတွေနဲ့ တွေ့ရင် … ရှက်နေတာနဲ့ … စကားမပြောရဲတာနဲ့ … ဘယ်တော့မှ ရီးစားရမယ့်ကောင် ဟုတ်ဘူး …
“လာစမ်းပါကွာ … ဒီည မင်း လူပျိုဘဝကို … ဂိတ်ဆုံးလိုက်ကွာ” … ရဲနိုင် ရီပြီးပြောသည် …
“ဟာကွာ … ငါ့ဘာသာနေပါရစေ … ငါက ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်တွေ မကြိုက်ဘူး ဆိုတာ မင်းလည်း သိတာပဲ … မင်းသာ ဂရုစိုက် … ဦးထုပ်မဆောင်းပဲ လုပ်ရင် … အေကိုက်ခံရမယ် သတိထား”
“အောင်မာ … ရီးစားတောင် မရှိတဲ့ကောင်က ငါ့ကို ဆရာလုပ်လို့ … ဟိုမှာတွေ့လား … ငါသွားမော့တော့မယ်”
“အိုကေ … ငါ ဒီမှာ ဆက်ထိုင်လိုက်အုံးမယ်”
သက်နိုင် … မလိုက်သွားတော့ … ဘီယာသုံးပုလင်းနဲ့ … ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးစားပြီး … လူက ရီဝေဝေဖြစ်ချင်နေသည် … ပင်လယ်လေက … ဖြေးဖြေးချင်း … တိုက်နေတော့ … အိပ်ချင်သလိုလို ဖြစ်လာသည် … မျက်နှာသုတ်ပုဝါကို ခင်းပြီး … အိပ်ချလိုက်သည် … မျက်စိက တဖြေးဖြေး မှေးလာသည် … မှေးကနဲ ဖြစ်သွားတုန်း … နားထဲ စကားသံ တစ်ချို့ဝင်လာသည် … သက်နိုင် အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ … လက်နှစ်ဘက်ကို ထောက်ပြီး … မော့ကြည့်လိုက်သည် … အလှနတ်သမီးတစ်ပါး … သူ့ကို သေချာငုံ့ကြည့်ပြီး … သက်နိုင့်ကို … စိုးရိမ်သံလေးနဲ့ …
“ဟိတ် … အိပ်နေတာလား … မူးနေတာလား”
သက်နိုင် အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ … ခေါင်းထောင်ထပြီး … ခေါင်းကို ယမ်းကာ … သူ့ကို ကြည့်လိုက်ပြီး
“မင်းက … နတ်သမီးလား … လူလားဟင်”
“လူပါရှင့် … အိပ်မပျော်လို့ ကမ်းခြေမှာ … လမ်းလျှောက်လာရင်း … ရှင့်ကို တွေ့တာပဲ … မသိပါဘူး … မူးပြီး လေဖြတ်နေတာလားလို့”
“ဟား ဟား … မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ … မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတာ … တကယ်နော် … ယူက နတ်သမီးနဲ့ တူတယ်”
“ခစ် … ခစ် … ရှင်က မြှောက်ပြောတတ်တယ်”
“မမြှောက်ပါဘူးဗျာ … အဟုတ်ပြောတာပါ”
တကယ်ပါ … အရမ်းလှသည် … ဖိနပ်မပါပဲ … သဲပြင်မှ နည်းနည်း နစ်နေတဲ့ ခြေဖဖိုး … လုံးသည်လည်း မဟုတ် … ပြားချပ်ချပ်လည်းမဟုတ် … ကြည့်လို့ကောင်းသည် … သူ့အထက်က ခြေသလုံးလေးက … ဝင်းနေတာပဲ .. အနာတစ်စက်မှ မရှိ … ပေါင်တံလေးကလည်း … ကစ်ကစ်လေး … အဆီပိုမရှိ … ပိန်ညှောင်ညှောင်မဟုတ် … ပေါင်တံလေးကို ကြည့်ရုံနဲ့တင် … စိတ်ကြွစေသည် … အောက်ကနေ မော့ကြည့်တော့ … ဂါဝန်တိုတိုလေးအောက်မှာ … ပင်တီ အဖြူလေးက … ၀ိုးတဝါး … သုံးမြှောင့်လေး … မို့ဖောင်းနေသည် … ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားက … ဟာလေးက … သက်နိုင့်စိတ်ကို … မြှူဆွယ်နေသလိုပဲ … ဟင်း … နတ်သမီးလေးရယ် … လှလိုက်တာဗျာ … ကိုက်စားချင်တယ် … အပေါ်က အင်္ကျီလေးက … ကြိုးတစ်ချောင်း … ပါးပါးလေး … ဘရာစီယာလေးက … အပြည့်မဟုတ် … ရင်နှစ်မွှာက … အောက်မှာ ပြည့်တင်းလွန်းသည် … ခါးလေးကို ကိုင်းပြီး ငုံ့ပြောနေတော့ … ကြိုးတစ်ချောင်း အင်္ကျီလေးက … ဟနေသည် … ကြားထဲက … မို့ကြွနေတဲ့ ရင်နှစ်မွှာကို … ထင်ထင်ရှားရှား မြင်နေရသည် … ငုံ့ထားပေမယ့် … ရင်နှစ်မွှာက … တွဲကျနေမယ့်အစား … မို့မို့ကျစ်ကျစ်လေး … ဖြစ်နေသည် …သူက အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ အပျိုစစ်စစ် ဖြစ်မယ် ထင်တယ် … သက်နိုင့်ကို ငုံ့ကြည့်နေတဲ့ မျက်နှာလေးကလည်း … လှလိုက်တာဗျာ … မျက်ခုံး … မျက်လုံး … မျက်နှာပေါက် … ဘာမှ အပြစ်ပြောစရာမရှိ … လှလိုက်တာ … နတ်သမီးရယ် … ဝတ်စားထားတာက … ဆက်ဆီ ကျပေမယ့် … သူ့မျက်နှာက … တခြားကောင်မလေးတွေလို … ပူလောင်မနေ … ရင်ကို အေးစေသည် … ညာဘက်ပါးမှာ ပါးချိုင့်လေးပါတော့ … ပိုပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းသည် …
“ဘယ်သူမှလည်း … မရှိတော့ဘူးနော်”
“ဟုတ်တယ် … အကုန်လုံး … ဘားမှာ ကနေကြတယ်”
နတ်သမီးရဲ့ အသံလေးက … သာယာသည် … ချိုသာသည် … ထူးခြားတာက … သူ့အသံမှာ … ကြင်နာသံလေးပါနေသည် … သူ စကားပြောတိုင်း … နားထဲမှာ … ချိုပြီး ဝင်သွားသည် … ဘယ်လိုဆုတောင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတာလဲ … နတ်သမီးရယ် … သူ့ကို တစ်မိနစ်လောက် ငေးကြည့်နေရင်း … စကားမပြောမိ … နတ်သမီးရဲ့အလှမှာ … မျောနေမိသည် … တိတ်ဆိတ်မှုကို … သူက စပြီး …
“ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် ကြည့်နေရတာလဲ … မနေတတ်ဘူးကွာ”
“ဟာ … ဆောရီး … အရမ်းလှလို့ပါဗျာ”
“အို … အပိုတွေ … ယူက သိပ်မြှောက်ပြောတတ်တယ်”
“မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ … တကယ်ပါ … ဒါနဲ့ … ဘယ်နှနာရီရှိပြီလဲဟင်”
“နှစ်နာရီ … ရှိပြီရှင့်”
“စန္ဒီ့သူငယ်ချင်းနဲ့ … ယူကရော”
“ဟုတ် … ယူရော”
“ဟုတ်သားပဲ … ကိုယ့်နာမည်က သက်နိုင် … ကိုယ်လည်း သူငယ်ချင်းနဲ့ လာအပန်းဖြေတာ”
သက်နိုင် … မတ်တပ်ရပ်ပြီး … လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ … လက်ကမ်းပေးလိုက်သည် … စန္ဒီကလည်း … သူ့လက်ကလေးကို … ပေးရှာပါသည် … စန္ဒီ့လက်ကလေးက … နူးညံ့သည် … သူ့လက်ကလေးကို … ကိုင်လိုက်တာနဲ့ … လူတစ်ကိုယ်လုံး … ဖိန်းကနဲ ရှိန်းကနဲ ဖြစ်သွားသည် … သက်နိုင် … စန္ဒီ့လက်ကလေးကို … တော်တော်နဲ့ မလွှတ် … အထိအတွေ့မှာ သာယာနေမိသည် …
“ဟိတ် … လက်လွှတ်အုံးလေ”
“ဟာ … လက်လွှတ်ပါဆို”
“မလွှတ်ချင်တော့ဘူး … လက်လွှတ်လိုက်ရင် … တစ်သက်လုံး ဝေးသွားလိမ့်မယ်”
သက်နိုင်၏ နမိတ်ဖတ်တဲ့ စကားက … တစ်ချိန်မှာ တကယ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုတာ … ကာယကံရှင်နှစ်ယောက်လုံး မသိကြသေး …
“အို … ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး”
“စန္ဒီ့ကို … ချစ်တယ်ဗျာ”
“အို … အခုမှ စတွေ့တာကို …”
“စန္ဒ္ဒီ ကိုယ့်ကို … ချစ်တယ်မှတ်လားဟင်”
စန္ဒ္ဒီ … နည်းနည်းလေး ရုန်းကြည့်သည် … မရ … စန္ဒ္ဒီ့လက် နောက်တစ်ဖက်ကိုပါ ထပ်ဆွဲသည် … သူ့မျက်ဝန်းက အသနားခံနေသည့်ပုံ … စန္ဒ္ဒီ … ကြွေသွားသည် … အို … ရင်တွေ ခုန်လိုက်တာ … သူ့မျက်နှာက စန္ဒ္ဒီ့နားကို တစ်ဖြေးဖြေးကပ်လာသည် …
“အို … လွှတ်ပါအုံး”
“ဟင့်အင်း … စန္ဒ္ဒီက ချစ်တယ်ပြောမှ လွှတ်မယ်”
“မစဉ်းစားနဲ့ … စန္ဒ္ဒီ့ မျက်လုံးတွေက … ကိုယ့်ကိုချစ်နေတယ်ဆိုတာ … ကိုယ်သိပါတယ်”
ဒီအချိန်မှာပဲ … ဟိုတယ်ထဲက … ကောင်မလေးတစ်ယောက် ပြေးထွက်လာတယ် … သူ့နောက်က ကောင်လေးတစ်ယောက်က ဟီး ဟီး … ဟား ဟား နဲ့ … အသံမျိုးစုံထွက်ပြီး … လိုက်ဖမ်းနေတဲ့ပုံစံ …
စန္ဒ္ဒီ နည်းနည်း … ရှက်သွားသည် … သူ့လက်ကို … ဘယ်ယောက်ျားလေးမှ ကိုင်ဖူးတာမဟုတ် … စန္ဒ္ဒီ ရီးစားလည်း မထားဖူးပါဘူး … အခုတော့ …
“လွှတ်ပါရှင် … ဟိုမှာ လူတွေလာနေပြီ”
စန္ဒ္ဒီ့အသံ နည်းနည်းတုန်နေသည် … ကြောက်သည် … မျက်နှာလေးက ရှက်သွေးရောင် ဖြန်းထားလို့ … နီရဲရဲလေးဖြစ်နေသည် … သူ့ကို သောင်ပြင်မှာ စတွေ့တော့ … ဘာကြောင့်မှန်းမသိ … စိတ်ဝင်စားမိသည် … အရပ်ကလည်း ရှည်မည့်ပုံစံ … နောက်ဗလကလည်း တောင့်သည် … မျက်လုံး … အိပ်နေပေမယ့် … ယောက်ျားပီသသည့်မျက်နှာ … သူ့ကို တွေ့တော့ … စန္ဒီ့ရင်တွေ … တဒိန်းဒိန်းခုန်နေသည် … သူများတွေ ပြောနေကြတဲ့ … အချစ်ဆိုတာ ဒါလားဟင် … အချစ်နဲ့ စတွေ့ရင် ရင်တွေ တတအားခုန်တယ်တဲ့ … ဒါဆို စန္ဒီ … အချစ်နဲ့ တွေ့နေရပြီပေါ့ … ဟင်း … ခက်ပါတယ် … အခုမှ စတွေ့တဲ့ ချစ်သူက … နည်းနည်းတော့ … ဆိုးမယ့်ပုံစံ … တဇွတ်ထိုး … လူဆိုး …
“မလွှတ်ဘူး … ချစ်တယ်ပြောမှ”
“အင်း … ချစ်တယ်”
“ဟင့်အင်း … မကြားလိုက်ဘူး … အသံက အရမ်းတိုးတယ်”
“ဟာကွာ … အဲဒီလို မဆိုးရဘူးလေ … ချစ်ပါတယ်ရှင်”
သူက ကတိတည်သားပဲ … စန္ဒ္ဒီ့လက်ကို လွှတ်ပေးလိုက်သည် … ပြေးလာတဲ့ လူတွေကို ကြည့်လိုက်သည် … အို … ဟိုနောက်က ကောင်လေးက … ဘာမှလည်း မဝတ်ထားဘူး … ဟာ … ရှက်စရာကြီး … စန္ဒ္ဒီ့ဘဝမှာ ဒီတစ်ခါ ပထမဆုံးပါပဲ … ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကို … ကိုယ်လုံးတီးနဲ့ မြင်ဖူးတာ … ရှက်ရှက်နဲ့ … မျက်စိမှိတ်ပြီး … သူ့ရင်ထဲကို တိုးဝင်မိသည် … အို … ငါဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲ … သက်နိုင် အလိုက်သင့်ကလေး … စန္ဒ္ဒီ့ကို ဖက်လိုက်သည် … စန္ဒ္ဒီ့ခါးလေးကို … အသာအယာ ဖက်လိုက်ပြီး … ချစ်သူ့ကို … ရင်ဘတ်ထဲ … ဝှက်လိုက်သည် … ဟုတ်ပ … ဟိုကောင် ရဲနိုင် တော်တော်ကဲနေသည် … ဘာမှ မဝတ်ထားဘူး … မူးပြီး သောင်းကျန်းနေတယ်ထင်တယ် … အရှေ့ကကောင်မလေးကလည်း … ဝတ်သာဝတ်ထားတယ် … ဘီကနီနဲ့ဆိုတော့ … အင်္ကျီကပ်တယ်ဆိုရုံလေး … အတင်းပြေးလာတော့ … အရှေ့က ပစ္စည်းတွေက … ယမ်းခါနေသည် … သူ့ကို ကျော်သွားပြီး … သက်နိုင်နောက်ကနေ ဆက်ကြည့်နေသည် … မိုက်တယ်ကွာ … အနောက်က အိုးက ရှယ်ပဲ … အင်း … ရဲနိုင်အကြိုက် … ခပ်တောင့်တောင့်ပဲ … ရဲနိုင်တို့ကတော့ … ပိုင်ပါ့ … လက်သွက်တယ် … ရဲနိုင် … အနားရောက်လာတော့ …
“ဖက်ထား … ဖက်ထား … လွတ်သွားရင် … ဆွဲစားမှာနော် … ဟား ဟား ဟား”
သူတို့နှစ်ယောက် … ရေထဲကို … တဝုန်းဝုန်း ခုန်ဆင်းသွားကြသည် … ဟီး ဟီး ဟား ဟားနဲ့ … ပျော်ရွှင်သံတွေက သက်နိုင်ကိုပါ ကူးစက်စေသည် … ရင်ခွင်ထဲက ချစ်သူလေးက … ခေါင်းလေးမော့ပြီး …
“အရမ်းဆိုးတာပဲနော် … ဘာမှလည်း မဝတ်ထားဘူး”
“ဟုတ်ပ … ဒီကောင်က … အဲဒီလိုပဲ … ချက်ကြောနဲ့ ရှက်ကြော မှားဖြတ်ထားတာ”
“ယူက … သိလို့လား”
“ကိုယ့်သူငယ်ချင်းပဲ … မသိပဲနေမလား”
“ဒါဆို … ရှင်တို့က လူဆိုးတွေပေါ့”
“ဟား ဟား … မဟုတ်ပါဘူး … အချစ်ကလည်း”
“ဟင့်အင်း … ချမ်းလာပြီ”
“ဟုတ်ပ … ချစ် … ချမ်းနေပြီလား”
“အန် … ချစ်သူမို့လို့ အချစ်လို့ ခေါ်တာ … ကိုယ့်ကိုရော ဘယ်လိုခေါ်မှာလဲ”
“မခေါ်ဘူးလား … မခေါ်ရင် …”
သက်နိုင် … စန္ဒ္ဒီ့ခါးလေးကို … ခပ်တင်းတင်းဖက်လိုက်သည် … ခါးလေးကလည်း … သေးလိုက်တာ … သူ့လက်ထဲမှာ … အရုပ်ကလေးအတိုင်းပဲ … ကော့ပြီးပါလာသည် … ခါးကို ခပ်တင်းတင်းအဖက်ခံလိုက်ရတော့ … အလန့်တကြား … ချစ်သူက မော့ကြည့်သည် … လန့်နေတဲ့ အကြည့်လေးက … အသည်းခိုက်သွားပြီ … နှုတ်ခမ်းလေးက လှလိုက်တာကွာ … နမ်းချင်တယ် … စိတ်ကတွေးလို့ မဆုံးခင် … သူ့နှုတ်ခမ်းက … ဂဟေဆက်သွားသည် …
စန္ဒ္ဒီ့နှုတ်ခမ်းလေးက သိပ်မထူ … ပါးသည် … ဂျယ်လီလေးလို … နူးအိသည် … နှုတ်ခမ်းလေးကို … အသာအယာ စုပ်လိုက်သည် …
“အို … တော်ပြီနော် … ကို”
စန္ဒ္ဒီ … သူ့ရင်ဘတ်လေးကို တွန်းပြီး … ခေါင်းလေးကို ယမ်းခါမိသည် … တစ်ခါမှ ယောက်ျားနဲ့ မထိတွေ့ဘူးတဲ့ … အရိုင်းလေးဆိုတော့ … အထိအတွေ့အသစ်ကို … ကြောက်မိသည် … မချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူး … ကိုရယ် … စန္ဒ္ဒီ မနေတတ်လို့ပါ … နောက်ပြီး … ရှက်တယ် …
“မြန်မာ့အသံက … တစ်ခါပဲ လွှင့်တယ် … ခစ် … ခစ်”
စန္ဒ္ဒီကလည်း … နောက်တတ်သည် …
“မရဘူးကွာ … ပြန်ခေါ်ပါအုံး … ချစ်ရယ်”
“သေချာနားထောင်နော် … ကို”
“ဟား … တကယ်ပြောတာနော် …”
“အင်း … တစ်ကယ်ပေါ့ ကိုရဲ့ … မယုံဘူးလား”
“ယုံပါတယ် … ချစ်ရယ် ယုံပါတယ် … ဟီး … ပျော်လိုက်တာ”
သက်နိုင်ပျော်လွန်းလို့ … ချစ်သူကို … ခါးကနေပွေ့ပြီး … အပေါ်ကို မြှောက်လိုက်သည် …
ရုတ်တရက်မို့ … စန္ဒ္ဒီ့အသည်းတွေ အေးကနဲ ဖြစ်သွားသည် … သက်နိုင် … သေချာ ပြန်ဖမ်းပြီး … နှစ်ပတ်သုံးပတ် မွှေ့လိုက်သည် …
“ကိုက … အရမ်းကဲတာပဲ … အဲလိုမလုပ်နဲ့ … စန္ဒ္ဒီမူးတယ်”
“အိုး … ဆောရီး … ချစ်”
သက်နိုင် … စန္ဒ္ဒီ့ကို မြန်မြန် ပြန်ချပြီး … သေချာကြည့်လိုက်သည် …
“ဟွန့် … သူ အရမ်းကဲတယ်”
စန္ဒ္ဒီ့လက်သီးဆုပ်လေးနဲ့ … သက်နိုင်ရင်ကို ထုလိုက်သည် … ဒုန်း …
“အေးနေပြီ မှတ်လား ချစ် … အထဲဝင်ကြမယ်လေ … ဒါနဲ့ … ချစ်က ဘယ်မှာ တည်းတာလဲ”
စန္ဒ္ဒီ … ထောင့်ဆုံး ဘန်ဂလိုလေးကို လက်ညှိုးထိုးပြသည် …
“ဟုတ်လား … ကိုယ်တို့က … ဒီဘက်မှာ”
အံ့သြစရာပဲ … ဘန်ဂလိုတွေက ဘေးချင်းကပ်ရပ် … ကံတရားက ဆန်းကြယ်လိုက်တာ … ဒီတစ်ခါတော့ မြှားနတ်မောင် … လေးနဲ့ သေချာ ပစ်ပြီထင်တယ် … ဘန်ဂလိုရှေ့ရောက်တော့ … စန္ဒီ … အထဲကို မဝင်ချင်သေး … ချစ်သူအသစ်နဲ့ … နေချင်သေးသည် … လေကလည်း အေးလာတော့ … ချမ်းလာသည် … စန္ဒီ အထဲကို ဝင်ဖို့ တံခါး ဖွင့်လိုက်သည် …
“ချမ်းလာပြီ … ကိုရဲ့”
“အချမ်းပြေအောင် … စပိုင်သောက်မလားဟင်”
“အင်း … သောက်မယ်”
စန္ဒီ … အရက်မသောက်တတ်သေးပေမယ့် … ဝိုင်လောက်တော့ … သောက်လေ့ရှိသည် … သက်နိုင် … စန္ဒီ့ကို … ဟိုဘက်က ဘန်ဂလိုလေးထဲ ခေါ်လာသည် … တံခါးဖွင့်ပြီး … သူ အရင်ဝင်လိုက်ပြီး … လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ … စန္ဒီ့ ပုံစံလေးက … ဝင်ရမှာ … တုံ့ဆိုင်းဆိုင်း ဖြစ်နေသည် …
“ဝင်လာခဲ့လေ … ချစ် … ကိုက်မစားပါဘူးကွ”
“ဟွန့် … ကို … မကဲရဘူးနော်”
သက်နိုင် … ပါးစပ်က အင်းလိုက်ပေမယ့် … စိတ်ကတော့ နည်းနည်း ကြွနေသည် … န္ဒီ့အင်္ကျီလေးက … ပါးလွန်းသည် … အထဲက ရင်သားမို့မို့လေးက … ပိုကြွလာတယ်လို့ ထင်သည် … ဂါဝန်လေးကလည်း … တိုလွန်းသည် … ခုနက … အောက်နေ မြင်လိုက်ရတဲ့ … တြိဂံလေး ခုံးခုံးလေးက … နည်းနည်းတော့ ရင်ခုန်လာသည် … မကောင်းပါဘူးလေ … အခုမှ စချစ်တာ … ဒါမျိုးတွေလုပ်လိုက်ရင် … သူမုန်းသွားလိမ့်မယ် … သက်နိုင် … အတွေးရိုင်းတွေကို … အမြန်ဖျောက်ပြီး … ရေခဲသေတ္တာကို ဖွင့်ကာ … စပိုင် နှစ်လုံး ယူလိုက်သည် …. တစ်လုံးကို ဖောက်ပြီး … စန္ဒီ့ကို လှမ်းပေးလိုက်သည် …
“ရော့ … အချစ်”
စန္ဒီက မတ်တပ်ရပ်နေရင်း … မော့လိုက်သည် … သက်နိုင် မွေ့ယာပေါ်မှာ … ထိုင်”
သက်နိုင် လက်ကမ်းပေးလိုက်သည် … စန္ဒီက … အလိုက်သင့်လေး … သက်နိုင်ဘေးမှာ လာထိုင်သည် …
“ချစ် … ကို့ကို တစ်ကယ်ချစ်တာလား”
“ဟင့်အင်း … မချစ်ဘူး”
“အောင်မြတ်လေး … လန့်လိုက်တာ … အသံပြဲကြီးနဲ့ …”
“ချစ်လား … မချစ်ဘူးလား”
“မချစ်ဘူး … မချစ်ဘူး … ခစ် … ခစ်”
“လိမ်ပြောတဲ့ ကောင်မလေး … တွေ့ကြတာပေါ့ကွာ”
သက်နိုင်ကိုကြည့်ပြီး ပြောနေတဲ့ … စန္ဒီ့မျက်လုံးလေးက နည်းနည်းတော့ ရီဝေဝေဖြစ်နေသည် … ဒါပေမယ့် ပြုံးနေသည် … လှောင်ပြုံး … ဒီအပြုံးက သက်နိုင်စိတ်ကို ကျလိကျလိဖြစ်စေသည် … ၀ိုင်ပုလင်းကို … ကုတင်ဘေးမှာ ချပြီး … စန္ဒီ့ကို … ဖက်ကာ လှဲချလိုက်သည် …
“အို … မှောက်ကုန်တော့မှာပဲ …”
“ပေး … အဲဒီပုလင်း”
သက်နိုင် … စန္ဒီ့လက်ထဲက ပုလင်းကို ယူပြီး … ကုတင်ဘေးကို ပစ်ချလိုက်သည် … စန္ဒီကတော့ ပက်လက်ကလေး … သူစိတ်တိုနေတာ ကြည့်ပြီး … တခစ်ခစ်နဲ့ ရီနေသည် …
“ခစ် … ခစ် … စိတ်ဆိုးလိုက်တာလည်း လွန်ရော”
“ဟာကွာ … ချစ်လား မချစ်ဘူးလား”
“ချစ်ဘူး … ချစ်ဘူး”
သက်နိုင် … စိတ်တိုလာသည် … အချစ်က စနေမှန်းသိပေမယ့် … ချစ်ဘူးဆိုတဲ့ စကားလုံးကို … မကြားချင် … မခံစားနိုင်ဘူး … သက်နိုင် … ချစ်ဘူး … ချစ်ဘူးလို့ပြောနေတဲ့ … နှုတ်ခမ်းလေးကို ဒဏ်ခတ်တဲ့ အနေနဲ့ … ဖိနမ်းပစ်လိုက်သည် …
အနမ်းတွေက ချိုမြိန်လွန်းပါသည် … ချစ်သူ့နှုတ်ခမ်းလေးက … ဂျယ်လီလေးလို … အိအိတင်းတင်းလေး … နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားကို … သက်နိုင် လျှာလေးနဲ့ ပွတ်သပ်ပေးရင်း … အထဲက စန္ဒီ့လျှာလေးကို … လိုက်ဖမ်းနေမိသည် …
“အို … ကိုရယ်”
စန္ဒီ့မျက်လုံးလေးတွေ … မှေးဆင်းသွားသည် … အထိအတွေ့က … လူကို မိန်းမောစေသည် … ပထမဆုံး … နမ်းဖူးတာဆိုတော့ … ကြက်သီးတွေကလည်း … တစ်ကိုယ်လုံး ထနေသည် … သူ့လျှာလေးနဲ့ ထိတိုင်း … အို … ရင်ထဲမှာ … လှိုက်ခနဲ … လှိုက်ခနဲပါပဲ … သက်နိုင် … စန္ဒီ့နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းနေရင်း … လက်က … ဖုတ်လိုက် … ဖုတ်လိုက် ဖြစ်နေတဲ့ ရင်နှစ်မွှာပေါ် … ရောက်လာသည် …
“အို … ကို့ … ယားတယ်”
စန္ဒီ့ရင်သားလေးတွေက … မို့မောက်နေသည် … အပျိုမို့လို့ … ပြည့်ပြည့်တင်းတင်းလေး … ဖြစ်နေသည် … သက်နိုင် … သူ့ရင်သားလေးကို အုပ်ကိုင်ပြီး … ဖြေးဖြေးလေး … ကိုင်လိုက်သည် …
စန္ဒီ … ရူးပြီ … ကိုရယ် … အပေါ်မှာလည်း … စန္ဒီ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို … နမ်းနေတယ် … အောက်မှာလည်း … စန္ဒီ့နို့လေးကို … ကိုင်တယ် … သူကိုင်လိုက်တိုင်း … ကြက်သီးတွေ တဖြန်းဖြန်းထကုန်သည် … စန္ဒီ့မျက်နှာလေးက … ပန်းရောင်လေး သန်းလာသည် … စပိုင်ကြောင့်လား … အကိုင်အတွယ်ကြောင့်လား မသိ … မျက်နှာလေးက ပိုနီလာသည် … သက်နိုင် … ဖြေးဖြေးလေး အုပ်ကိုင်နေရာကနေ … နည်းနည်း … နယ်ပေးလိုက်သည် … စန္ဒီ မနေတတ် … နှုတ်ခမ်းလေးက … ငြီးတွားမိသည် …
“ဟင်း … ဟင်း … ဟင်း”
“အို … ဘာတွေ လျှောက်ကိုင်နေတာလဲ … ကိုရယ်”
သက်နိုင် … အင်္ကျီပေါ်ကနေ … ကိုင်ရတာ အားမရတော့ … လက်လေးက … အောက်နားကို ဆင်းလာပြီး … အင်္ကျီအောက်ကနေ … လက်ကို လျှိုဝင်လိုက်သည် … ကြားက ကန့်လန့်ကန့်လန့် လုပ်နေတဲ့ … ဘရာစီယာလေးပါ … ဆွဲလှန်လိုက်သည် … နူးညံ့လိုက်တာ … အသားဆိုင်လေးတွေက … ထိလို့ ထိမှန်းတောင် မသိဘူး …
“အင်္ကျီတွေ ပြဲကုန်အုံးမယ် … ကိုရယ် … လက်ပြန်ထုတ်လိုက်ပါ … ”
“ဟင့်အင်း … ချစ်လားမချစ်ဘူးလား”
“ချစ်လို့ … ဒီအထိလိုက်လာတာပေါ့ … ကိုရဲ့ … တုံးပါ့”
“တကယ် … ကို့ကို အရမ်းချစ်တယ်”
“ဒါမှ … ကိုယ့်အသည်းကွ”
သက်နိုင် … စန္ဒီ့လည်တိုင်လေးကို … အတင်းနမ်းပစ်လိုက်သည် …
“အို … ယားပါတယ်ဆိုမှ … အတင်း”
“ဖယ်ပါအုံး လက်ကြီးက … အင်္ကျီတွေ ပြဲကုန်မယ်”
“အင်္ကျီမပြဲအောင် … ချွတ်လိုက်မယ်နော်”
ချစ်သူ ဆီက … ပါမစ်ကျလာတော့ … သက်နိုင် စန္ဒီ့ အင်္ကျီလေးကို … အသာချွတ်လိုက်သည် … စန္ဒီ ခေါင်းလေး ကြွပြီး … လက်ကလေး မြှောက်ပေးလိုက်သည် … ကြိုးတစ်ချောင်း အင်္ကျီမရှိတော့ … ဟယ်လိုကစ်တီ ရုပ်ကလေးတွေပါတဲ့ … ဘရာစီယာလေး … သူလည်း မဖုံးနိုင်ပါဘး … အောက်မှာ … ကြွတက်နေတဲ့ … ရင်နှစ်မွှာက … မပေါ့်တပေါ် … သက်နိုင် … ဘရာစီယာလေးကို … အသာလှန်တင်လိုက်သည် … လှလိုက်တာ … လှလိုက်တာ … စန္ဒီ့နို့လေးက … မကြီးလွန်းမသေးလွန်း … ဖွံ့ထွားစ … ဒါပေမယ့် … လိမ္မော်သီးလို အလုံးညီသည် … ဖြူဝင်းနေသည် … မာမာကျစ်ကျစ်လေး … ပိုလှစေတာက … ထိပ်ဖျားက … နို့သီးလေး … အရောင်က ပန်းရောင်ဖျော့ဖျော့ … ထိပ်ဖျားလေးက … သေသေချာချာ အပြင်ကို ထောင်ထွက်မနေ … အထဲမှာ နည်းနည်း ချိုင့်နေဆဲ … သက်နိုင် အသည်းတွေ ယားလာသည် … မနေနိုင်တော့ … ချစ်စရာကောင်းတဲ့ … စန္ဒီ့ရင်သားလေးကို … နမ်းပစ်လိုက်သည် …
စန္ဒီ့ရင်သားကို … စနမ်းလိုက်တာနဲ့ … စန္ဒီ … မနေတတ်တော့ … ခံရပိုခက်သည် … လက်ကလေးက … မွေ့ယာခင်းကို ဆုပ်ထားပြီး … အားတင်းကာ … ရင်သားကို ကော့ပေးလိုက်သည် … စန္ဒီ့နို့သီးလေးကို … သက်နိုင် လျှာနဲ့ ဖြေးဖြေးလေး ယက်ပေးလိုက်သည် … သူ့နို့သီးလေးက … ခေါင်းမထောင်လာသေး … အထဲမှာ ချိုင့်ဝင်ဆဲ … နှစ်ချက် သုံးချက် … စုပ်လိုက်သည် …
“အိုး … ဟာ … ရှီး”
“အို .. ကိုရယ် … ယားတယ် … ခစ် … ခစ်”
စန္ဒီ … စိတ်ကြွလာသည် … ကြည့်ပါလား … သူ့နို့သီး ပန်းရောင်လေးက … ထောင်လာသည် … သက်နိုင် … အားမရ … နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုနဲ့ ဖိကိုက်ထားပြီး … ထိပ်ဖျားလေးကို … လျှာနဲ့ အမြန်ပွတ်ဆွဲပစ်လိုက်သည် …
“အို … ကို”
“ဟာ … ဟာ … ဟာ”
စန္ဒီ … အသက်ရှုသံလေး မြန်လာသည် …
“ကိုရယ် … တော်ပါတော့ … စန္ဒီ မနေတတ်ဘူး”
မရ … ဒီဘက်ပြီးတော့ … ဟိုဘက် … သက်နိုင် … ဒီဘက်နို့လေးပြီးတော့ … ဟိုဘက်နို့လေးကို … အတင်း စို့လိုက်သည် …
“အာ … ဟာ … ရှီး”
“အိုး … မကိုက်နဲ့ … နာတယ် … ကိုရယ်”
သက်နိုင်သွားနဲ့ စန္ဒီ့ နို့သီးထိပ်ဖျားလေး ခြစ်မိသွားတော့ နာသွားရှာသည် … တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ … သေချာ ပြန်စို့ပေးသည် …
သက်နိုင် လက်တစ်ဖက်က … နို့လေးကို နယ်ပေးသည် … နို့သီးလေးကို … လက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဖွဖွလေး ခြေပေးသည် … စန္ဒီ့ မခံနိုင် … မွေ့ယာပေါ်မှာ တစ်ကိုယ်လုံး … တွ့န်လိမ်နေမိသည် … စန္ဒီ သက်နိုင်ခေါင်းကို … ဖိပြီး အောက်ကို တွန်းနေမိသည် … ယားယံခြင်းဒဏ်ကို စန္ဒီ မခံနိုင် … သက်နိုင်လက်က … အောက်ပိုင်းကို ဆင်းသွားသည် … ပေါင်တံလှလှလေးကို … ဖြေးဖြေးချင်း ပွတ်ပေးသည် …
“လျှောက်မပွတ်နဲ့ … ကိုရယ် … စန္ဒီမနေတတ်ဘူး … ယားတယ်”
သက်နိုင် … စန္ဒီ့ပေါင်လေးကို ပွတ်နေရာကနေ … ဖြေးဖြေးလေး … အပေါ်ကို တက်လာသည် … လက်က စကဒ်အောက်ကို … ဖြေးဖြေးလေး ဝင်သွားသည် … အပျိုစင်လေးရဲ့ တားမြစ်နယ်မြေထဲ … စပြီး ဝင်လာပါသည် … စန္ဒီ့စကဒ်လေးက … တိုတိုလေးဆိုတော့ … လှန်စရာမလို … ပေါင်ကြားလေးထဲ … လက်ရောက်သွားတော့ … စန္ဒီတွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားသည် … ရင်တုန်လိုက်တာ … အချစ်ရယ် … ပေါင်ကြားက … အတွင်းခံလေး၏ အနားသတ်ကို … စထိသည် … သူသိသည် … နီးလာပြီ … လက်ရဲ့အထိအတွေ့က … မို့မို့ဖောင်းဖောင်း … ပန်းခုံးလေးပေါ်ကို ရောက်လာသည် …
သက်နိုင် … အသာအယာလေး … ပွတ်ပေးလိုက်ပါသည် …
“လျှောက်မလုပ်နဲ့ … ကိုရယ် … စန္ဒီ … ရင်တွေတုန်နေပြီ”
တကယ်လည်း … စန္ဒီ ရင်တွေ တုန်နေပါသည် … အထိအတွေ့က … ရင်ခုန်စရာ … မိန်းမောစရာ … စိတ်တွေက ဘာလို့ ကြွနေတာပါလိမ့် … စန္ဒီသေချာမသိ … ဘာလို့ … ကြက်သီးတွေ ထနေတာလဲ … စန္ဒီနားမလည် … သေချာတာတော့ … သူ့ကို အရမ်းချစ်မိသွားတာပါပဲ … ချစ်ပါ ကိုရယ် … ချစ်ပါ …
စန္ဒီ့ရဲ့ … ပန်းနုနုခုံးခုံးလေးကို … သူပေါ့ … ဖွဖွလေးကိုင်နေတယ် …
“စန္ဒီ မနေတတ်ဘူး … ကိုရယ် … ”
စန္ဒီ့အသံလေးက … ညုတုတုအသံလေး မဟုတ်ဘူးဆိုတာ … သက်နိုင်သိသည် … အတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ … အပျိုလေးတစ်ယောက်ရဲ့ … နှစ်ကိုယ်ကြား ငြီးသံလေးက … ချစ်ဖို့ ကောင်းပါသည် … စန္ဒီ့အသံလေးကြောင့် … သက်နိုင် ပိုလို့ စိတ်ကြွစေသည် … ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ် … အသည်းရယ် …
သက်နိုင် … စန္ဒီ့ ပန်းနုနုလေးကို … လျှောက်စမ်းရင်း … တံခါးဝလေးကို … လိုက်ရှာနေမိသည် … ဘယ်တွေ့မလဲဗျာ … အပျိုလေးဆိုတော့ … စိနေမှာပေါ့ … စိတ်ထဲထင်တဲ့ … ပန်းလေး အလယ်ကို … လက်ညှိုးလေးနဲ့ ထိုးကြည့်မိတယ် … ဟုတ်ပါတယ် … ဒီနေရာပါပဲ … မသိမသာလေး ဟနေတယ် … စန္ဒီက ပေါင်ကို ကားထားတာမဟုတ်တော့ … ရှာရခက်သား … စန္ဒီအာရုံ မပြောင်းသွားအောင် … စန္ဒီ့ ပန်းရောင်နို့ဖျားလေးကို … လျှာလေးနဲ့ ကလိပေးနေတယ် … စန္ဒီ … မခံစားတတ်အောင် … အောက်မှာ တွန့်လိမ်နေပါတယ် … အချိန်လေးနည်းနည်းကြာလာတော့ … စန္ဒီ့ပေါင်လေးက နည်းနည်းကားသွားတယ် … တွေ့ပါပြီ … တံခါးဝလေး … အတွင်းခံလေးကတော့ … အချစ်ရည်တွေနဲ့ … စိုရွှဲစပြုနေပါသည် … သက်နိုင် … အတွင်းခံလေးကို လှပ်လိုက်ချင်တယ် … ဒါပေမယ့် … ဆန္ဒမစောပါဘူး … ချစ်သူကို … အချစ်ရဲ့ အရသာကို ပြည့်ပြည့်ဝ၀ ခံစားစေချင်တယ် … အကွဲကြောင်းလေးကြားထဲကို … လက်ကို အတင်းထည့်ကြည့်လိုက်တယ် … အတွင်းခံက ခံနေတော့ … ဘယ်ဝင်မလဲ … ဝင်တော့ဝင်သည် … လက်ဖျားလောက်လေး … စန္ဒီ လူးလွန့်သွားသည် …
စန္ဒီ့လက်ကလေး … သက်နိုင်လက်ကို လာတွန်းဖယ်သည် … မဟုတ် … လာဆုပ်ကိုင်ထားသည် … ငြင်းသည်တော့ … မဟုတ် … နာမှာစိုးလို့လား … ကြောက်တာလားမသိ … မသိမသာလေး တွန်းနေသည် … သက်နိုင် … လက်မလျှော့နိုင် … တံခါးဝ အဖျားကို … လက်သည်းလေးနဲ့ ခြစ်လိုက်သည် … ထင်သည့်အတိုင်း … စန္ဒီ … လူးလွန့်သွားသည် … အတွေ့အထိက … အဆန်းအပြားမို့ … ရုန်းလိုက်မိသည် … စန္ဒီ့နှုတ်ခမ်းဖျားလေးကလည်း ….
“အို … ဟင့် … ကိုရယ်”
စန္ဒီ့ရဲ့ ပန်းဖူးလေးက … နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာက … အတင်းညှစ်ထားသည် … သက်နိုင် သိသည် … ခေါင်းကို အပေါ်ကို နည်းနည်းတက်ပြီး … စန္ဒီ့လည်တိုင်လေးကို နမ်းလိုက်သည် … ပိုဆိုးသည် … ပန်းဖူးလေးရဲ့ ညှစ်အားက ပိုတိုးလာသည် … သက်နိုင် … မလျှော့နိုင် … ပိုထိုးထည့်ကြည့်သည် … ပိုပြီး မြန်မြန်ပွတ်သည် …
“ဟင့် … ဟင့် … ယားတယ် … ကိုရယ် … တော်ပါတော့”
သက်နိုင် … စန္ဒီ့ပန်းလေးကို ပွတ်နေရင်း … စန္ဒီစိတ်တွေ ပိုထလာသလို … ပေါင်လေးကလည်း … ပိုပြီးကားလာသည် … သက်နိုင် စန္ဒီ့ပန်းလေးကို ကလိနေရင်း … အထစ်လေးတစ်ခုကို … စမ်းမိသည် … တွေ့ပါပြီ … စန္ဒီ့ရဲ့ ပန်းဖူးလေး … သေးသေးလေးပေမယ့် … မာပြီး ခဲနေသည် … ခဲတံက ခဲဖျက်သာသာလောက်ဆိုပေမယ့် … သက်နိုင် သိသည် … ချစ်ဝတ်ရည်လေးတွေကလည်း … စိုစိုရွှဲနေပြီ … သက်နိုင် … စိတ်မနိုင်တော့ … စန္ဒီ့လည်တိုင်ကို နမ်းနေရင်းက … အနမ်းတွေချွေရင်း … အောက်ကို … ဖြေးဖြေးချင်းဆင်းလာသည် … ရွှေရင်မို့မို့က … မို့မို့မောက်မောက် … ဖြစ်နေတော့ … အနမ်းကြမ်းတွေ … ပေးပစ်လိုက်သည် … အချစ်လေး စန္ဒီ့ … သနားပါတယ် … မျက်နှာလေးက … ပန်းရောင်လေး သန်းနေပြီး … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို … ဖိကိုက်ထားသည် … ဖြစ်ရှာမှာပေါ့ … ဒီလိုအထိအတွေ့ကြောင့် … မျက်လုံးလေးကို … စင်းပြီး … အံကြိတ်ပြီး … ငြီးနေရရှာသည် … သက်နိုင် … စန္ဒီ့ချက်လေးကိုလည်း … တစ်ချက် စုပ်လိုက်သည် … ချက်လေးထဲကို … လျှာလေးထည့်ပြီး … မွှေလိုက်ချင်သည် … မွှေချင်စရာ … စန္ဒီ့ချက်လေးက လှတာကိုး … စန္ဒီရယ် … တစ်ကိုယ်လုံး … လှလိုက်တာ … ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် … ချစ်ဖို့ကောင်းသည် … စန္ဒီ့ချက်လေးကို … လျှာနဲ့ ကလိလိုက်တော့ … ဗိုက်သားလေးတွေက တုန်ခါသွားသည် … သက်နိုင်မှာ … တာဝန်ရှိသည် … စန္ဒီ့ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးနေရာကို … သွားရမည် … တခြားနေရာတွေတောင် … ဒီလောက်လှတာ ပန်းလေးဆို … သက်နိုင် … တွေးနေရင်း … စိတ်အရမ်းကြွလာသည် … နမ်းမည် … နမ်းမည် … အခု နမ်းမည် …
သက်နိုင် … စန္ဒီ့ပေါင်တံလေးတွေကိုလည်း … နမ်းသည် … ပေါင်သားဖြူဖြူလေးတွေက … အိနေသည် … ဒါပေမယ့် ကြက်သီးဘုလေးတွေက … အစီအရီ … အော် … သူ့ခမျာ … ကြက်သီးတွေ ထနေရှာပေါ့ … သက်နိုင် … စန္ဒီ့ပေါင်ကြားထဲလဲရောက်ရော … မြင်လိုက်ရပါသည် … စန္ဒီ့ရဲ့ ပန်းလေး … အချစ်ရဲ့ အဝင်ဝပေါ့ … မို့မောက်နေပါသည် … ဖောင်းအိနေပါသည် … လှလွန်းတော့လည်း … စကားလုံးရှာမရ … ချစ်စရာ … မို့မို့ဖောင်းဖောင်းလေးကို … အုပ်ထားတဲ့ အတွင်းခံလေးက … ပန်းရောင် … ချစ်ဖို့ကောင်းပါသည် … အတွင်းခံလေးကတော့ … အချစ်ရည်တွေ စိုစိုရွှဲနေသည် … တင်းပြီး ကပ်နေသည် … ချစ်သည် … စန္ဒီ့ကို သိပ်ချစ်သည် … ဘာကြောင့်မှန်းမသိ … နမ်းချင်သည် … ဘုန်းနိမ့်မယ်ဆိုလည်း … နိမ့်ပလေ့စေတော့ … နမ်းချင်သည် … တစ်ချက် ရွှတ်ကနဲ … နမ်းပစ်လိုက်သည် …
“ဟိတ် … ကို … ဘာတွေ လျှောက်လုပ်နေတာလဲကွာ”
“လှလွန်းလို့ပါ … အချစ်ရယ်”
“မကြည့်ပါနဲ့ … ကိုရယ် … စန္ဒီ ရှက်လွန်းလို့ပါ”
စန္ဒီလက်လေးက … သူ့ပန်းလေးကို … ကာကွယ်ချင်သည် … မရ … သက်နိုင် … လက်လေးကို … တွန်းဖယ်ပစ်လိုက်ပြီး …
“တစ်ခါလောက် … နမ်းချင်တယ် … ချစ်ရယ်”
“ဟေ့အေးကွာ … ဟင့် … ကိုနော်”
သက်နိုင် မနေနိုင်တော့ … စန္ဒီ့ရဲ့ “ဟင့် … ကိုနော်” ဆိုတဲ့ အသံလေးက … သက်နိုင်စိတ်ကို … ပိုပြီး တွန်းအားပေးနေသည် … သက်နိုင် … အတွင်းခံလေးကို … ဘေးကပ်လိုက်သည် … ခက်ခက်ခဲခဲပါပဲ … အတွင်းခံလေးက … စန္ဒီရဲ့ ချစ်ရည်တွေ စိုရွှဲနေတော့ … ကပ်နေသည် … ပန်းလေး မို့မို့က … အစွမ်းကုန် … ဖောင်းကားနေတော့ … ပိုပြီးကြပ်သည် … မတတ်နိုင် … သက်နိုင် … လက်လေးနဲ့ … အတွင်းခံလေးကို … ဘေးကပ်လိုက်သည် … စန္ဒီနာသွားမှာလည်း စိုးသည် … အတင်းမလုပ်ချင် … ဂရုတစိုက်နဲ့ … ဘေးဖယ်လိုက်တော့ … စန္ဒီရယ် … ကိုယ် ရူးပြီ … စန္ဒီ … အချစ်ရဲ့ … ပန်းလေးက … လှလွန်းသည် …
ဖြူသည် … သန့်ရှင်းသည် … မိန်းကလေး အင်္ဂါဆိုပေမယ့် … အနံ့မရှိ … ပန်းလေးက … နေမထိ လေမထိမို့လို့လား မသိ … ဖြူဖွေးနေသည် … ပန်လေးပေါ်က … အမွှေးလေးတွေက … နုနုလေး … မထူပါ … ကျိုးတိုးကျဲတဲနဲ့ … ပေါက်ခါစ … မြက်နုလေးလို … ပါးပါးလေး … မြက်နုလေးတွေက … ပန်းလေးကို … လုံခြုံအောင် မဖုံးထားနိုင် … ပန်းလေးရဲ့ အကွဲကြောင်းလေးက … သမန်းမြက်ရှထားသလောက်သာ … အရာလေး ထင်တယ်ဆိုရုံလေး … သက်နိုင် … အရမ်းနမ်းချင်လာသည် … စန္ဒီ့ ပန်းလေးကို … အသာလေး ဖြဲလိုက်သည် … အထဲမှာ စိုစွတ်နေတဲ့ … ချစ်ဝတ်ရည်တွေက … တစိမ့်စိမ့် အပြင်ကို ထွက်နေဆဲ … စန္ဒီ့ပန်းလေးရဲ့ အတွင်းပိုင်းက … ပန်းရောင်လေး … ဟော … တွေ့ပါပြီ … စန္ဒီ့ရဲ့ အချစ်ဖူးလေး … သေးသေးလေးပါပဲ … ဖုဖုလေးကို … သက်နိုင် လျှာနဲ့ ယက်ပစ်လိုက်သည် …
စန္ဒီ … ကယောင်ကတမ်းနဲ့ … သက်နိုင် ခေါင်းကို … အတင်းတွန်းပါသည် … မရပါ … သက်နိုင် ခေါင်းက … မဖယ်နိုင်တော့ … နုဖတ်နေတဲ့ … ချစ်ပန်းလေးပေါ်မှာ … လျှာလေးက … ဝေ့ဝိုက်ကာ ဆော့ကစားနေသည် … သက်နိုင် … ပန်းဖူးလေးကို … လျှာဖျားလေးနဲ့ ထိလိုက်တိုင်း … စန္ဒီ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်တက်သွားသည် … ငြီးသံလေးကလည်း … ပိုကျယ်လာသည် …
“အွန် … ဟွန့်”
“ဟာ … ဟင့် … ဟင့် … ဟင့်”
စန္ဒီ … ကို လုပ်ပေးနေတဲ့ … ခံစားချက်တွေက … ကောင်းလွန်းတော့ … သက်နိုင် ခေါင်းကို တွန်းနေတာကနေ … ခေါင်းအုံးလေးကို … ရေနစ်သူပမာ … အတင်းဖမ်းကိုင်ထားပြီး … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို … ခဲထားသည် … အသက်အောင့်ပြီးလည်း … ငြီးသည် … ခေါင်းလေးက … ယမ်းခါလိုက် … ကိုယ်လေးက … တွန့်သွားလိုက်နဲ့ … တစ်ချက်တစ်ချက် … စန္ဒီ့တင်ပါးလေးက … ကော့ကော့ပေးသည် … သက်နိုင် … စန္ဒီ့အကွဲကြောင်းလေးကို … အလျားလိုက် လျက်ပေးတော့ … စန္ဒီ့တင်ပါးက … ကြွလာလိုက် … ပြန်ကျသွားလိုက်နဲ့ … သက်နိုင် … စန္ဒီ့တင်သားနှစ်ခုကို … လက်လျှိုပြီး … မြှောက်ကာ … အတင်းယက်တော့သည် …
“အို … ကိုရယ် … စန္ဒီ့ရင်တွေ … အရမ်းခုန်တယ်ကွယ် …”
“ဟင့် … ဖြေးဖြေး … အာ … ရှီး”
“ဟာ … ဟာ … ဟာ … စန္ဒီ … သေပြီ … စန္ဒီ … သေပြီ … ဟင်း”
ပန်းလေးရဲ့ ဝင်ပေါက်ကလည်း … မဆိုစလောက်လေး … ဟလာသည် … သက်နိုင် … လက်ညှိုးလေးကို … စန္ဒီ့ပန်းလေးထဲ … နည်းနည်းလေး ထည့်ကြည့်လိုက်သည် ….
“ဟာ … နာတယ် … နာတယ် … ကိုရယ်”
အပျိုလေးအတွက် … လက်တဆစ်ဆိုတာ … ထည့်လိုက်ရင် နာတာပေါ့ … စန္ဒီ့ရဲ့ အာခေါင်ထဲက … ငြီးသံလေးက … ကျယ်လာသည် … စန္ဒီနာသွားမှာစိုးလို့ … သက်နိုင် … ပန်းဖူးလေးကို … ခပ်မြန်မြန် စုပ်ပေးလိုက်သည် … ချိုလိုက်တာ … အချစ်ရယ် … သက်နိုင် မရွံပါဘူး … ချစ်သူရဲ့ … ပန်းလေးကို … နမ်းလိုက်လို့ … ဘုန်းနိမ့်သွားမလား … သက်နိုင် မတွေးချင် … တွေးဖို့လည်း အချိန်မရှိပါ … ချစ်သူကို … ကောင်းစေချင်သည် … လူ့လောက … အရသာကို … ခံစားစေချင်သည် … သက်နိုင် … လက်ချောင်းလေးက …
ဖြေးဖြေးလေး … ထုတ်လိုက် … ထည့်လိုက်နဲ့ … လက်တစ်ဆစ်သာသာ … အရမ်းလည်း မထည့်ချင် … မထည့်ရက် … စန္ဒီနာသွားမှာလည်း စိုးသည် … စန္ဒီ … အောက်မှာ ကော့ပျံနေသည် … ခေါင်းအုံးအဖျားနှစ်ခုကို … လက်နှစ်ဖက်က တင်းတင်းဆုပ်ပြီး … ခေါင်းကို ဘယ်ညာ ယမ်းခါနေသည် … သက်နိုင် … စန္ဒီ့ရင်ခုန်သံတွေကို ကြားနေရသည် … သူ သိသည် … စန္ဒီ ပြီးတော့မည် … ဆန္ဒ၏ အဆုံးသတ်ကို ရောက်တော့ … စန္ဒီ့ မျက်နှာလေး … ပိုပြီး … နီရဲလာသည် … တစ်ကိုယ်လုံးက အကြောတွေ တင်းလားသည် … စန္ဒီ့တင်ပါးလေးက ကော့လိုက် ကျလိုက်နဲ့ … နောက်ဆုံးအကြိမ်မှာ … စန္ဒီ့ ကျောလေး … မွေ့ယာနဲ့ မထိတော့ … အတင်းကော့ပေးလိုက်သည် …
သက်နိုင် … အရမ်း နမ်းတော့ … ပန်းလေးက … ချစ်ဝတ်ရည်တွေ … ဒလဟော ထွက်ကျလာသည် … စန္ဒီ ကယောင်ကတမ်းနဲ့ … ငြီးနေသည် …
“ရှီး … ဟာာ”
“ဟာ … ဟာ … ဟာ … စန္ဒီ … မခံနိုင်တော့ဘူး … စန္ဒီရင့်ထဲမှာ …”
“ဟား … ကို … ကို … ကို့”
စန္ဒီ … ပြီးသွားပြီ … အချစ်ရည်တွေ အကုန်လုံး ထွက်ကျလာတော့ … ရင်က ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ … ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ် … စန္ဒီ့ရင်ထဲမှာ … အရမ်းမောတာပဲ … စန္ဒီ့အတွေးထဲမှာ … ကောင်းကင်မှာ လှိုင်းစီးရသလို … ငြိမ့်ကနဲ သိမ့်ကနဲ … နောက်ဆုံးအကြိမ်မှာ … မျက်စိထဲမှာ ကြယ်တွေလတွေ မြင်သွားသည် … ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ် … ကောင်းလိုက်တာ …
သက်နိုင် … မရပ်နိုင် … စန္ဒီ့ရဲ့ ဆန္ဒအဆုံးစွန်မှာ ထွက်လာတဲ့ … ချစ်ဝတ်ရည်တွေက … ပူနွေးနွေးလေး … စေးပျစ်လို့နေသည် … သက်နိုင် မရွံပါ … အကုန်လုံးကို … လျှာနဲ့ ယက်ပြီး … မြိုချလိုက်သည် … အားလုံးလည်း ပြောင်သွားရော … စန္ဒီ့မျက်နှာလေးကို ကြည့်ပြီး … စန္ဒီ့ပါးလေးကို … မြတ်မြတ်နိုးနိုး နမ်းလိုက်ရင်း …
“ကောင်းတယ်မှတ်လား … အသည်း”
“အင်း … အရမ်းကောင်းတယ် … ကိုရယ် … စန္ဒီ့ရင်ထဲမှာ တလှပ်လှပ်ဖြစ်နေတယ် … ”
“အရမ်းမောတယ် … ကိုရယ်”
“ဘာလို့ … စန္ဒီ့ဟာကို … နမ်းတာလဲကွာ … မရွံဘူးလား”
“မရွံပါဘူး … အရမ်းချစ်လို့ … နမ်းလိုက်တာ”
“ကျေးဇူးတင်ပါတယ် … ကိုရယ်”
“ပြီးတော့ … မွှေးတယ် … ချိုတယ်”
“အို … တော်ပါပြီ … စန္ဒီရှက်လာပြီ”
“အွန် … သူပဲ မေးပြီးတော့”
“စန္ဒီ့စိတ်တွေ … ဘယ်လိုခံစားရလဲဟင်”
“ကိုရယ် … စိတ်တွေက … တိမ်ပေါ်မှာ လွင့်နေသလိုပဲ … အင်း … ရိုလာကိုစတာ စီးရသလိုပဲ … ဝေါကနဲ … အေးကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်”
“ချစ်ပါတယ်ရှင် … အရမ်းချစ်ပါတယ်”
စန္ဒီ … သက်နိုင်ပါးကို … ရွှတ်ကနဲ နမ်းလိုက်သည် … ချစ်လွန်းတော့လည်း … နမ်းလိုက်ချင်ပါသည် … ကျေးဇူး … စန္ဒီ့ အနမ်းကြောင့် … သက်နိုင် … ကျေနပ်သွားသည် …
“ဟွန့် … ကောင်မလေး … သူများကို ခိုးနမ်းတယ်”
“ကိုနော် ခိုးမနမ်းပါဘူး … ပေါ်တင်နမ်းတယ် … ဘာဖြစ်လဲ … ဘာဖြစ်လဲ”
သက်နိုင် … နောက်တစ်ဆင့်တက်ရန် … စန္ဒီ့စကဒ်လေးကို … ချွတ်လိုက်ချင်သည် … စန္ဒီ့ စကဒ်လေးကို … စမ်းပြီး … ချွတ်ကြည့်သည် … မရ … နောက်က ချိတ်ကို မဖြုတ်တတ် …
“အသည်း … စကဒ်လေး ချွတ်ပေးအုံးနော်”
“အို … ကိုကလည်း … ဘာလုပ်မလို့လဲ”
“တော်ပါပြီကိုရယ် … ဒီမှာ ရင်တွေ အရမ်းတုန်တာပဲ”
“ခဏလေးပါ … အချစ်ရယ် … ကြည့်ချင်လို့ပါ”
“ဟွန်း … တော်ပါ … လူညာကြီး”
“ကိုနော် … မှန်မှန်ပြော … ကောင်မလေးတွေနဲ့ … ပတ်သက်ဖူးတယ်မှတ်လား”
“အင်း … ပတ်သက်ဖူးတယ်”
“ကိုရယ် … ဘာလို့ညာမပြောတာလဲ … သူများတွေဆို … မရှိပါဘူး ညာပြောတယ်လေ”
စန္ဒီမျက်နှာလေးက … ငိုမဲ့မဲ့ဖြစ်လာသည် … အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် … သဝန်တိုမိသည် … မနာလိုဖြစ်မိသည် …
“စန္ဒီနဲ့ သူ့ဆို … ဘယ်သူ့ကို ပိုချစ်လဲ”
“ကိုနော် … ဟင့်”
စန္ဒီမျက်နှာလေးက … ငိုတော့မလို … မျက်နှာပျက်သွားသည် … ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သည် … စန္ဒီက တွေ့တွေ့ချင်း ချစ်လို့ … တရင်းတနှီးနေမိပါတယ် … အမှန်ဆို … ဟုတ်ရင်တောင်မှ … လိမ်ပြောပေါ့ … ဒီလိုမျိုး အမှန်အတိုင်း … တည့်တည့်ကြီးပြောတော့ … စန္ဒီမခံစားနိုင် … ဝမ်းနည်းမိသည် … တော်ပါတော့ ရှင်ရယ် … ဆက်ပြောရင် … စန္ဒီ့အသည်းတွေ ကွဲကုန်တော့မယ် …
“သူ့နို့သီး ထိပ်ဖျားလေးက … ပန်းရောင်လေး … သိလား”
“သူ့ပန်းလေးက … စန္ဒီ့လိုပဲ … အမွှေးသိပ်မရှိဘူး … အထဲမှာ ပန်းရောင်လေး …”
စန္ဒီ … အောက်နှုတ်ခမ်လေးကို … ကိုက်ထားသည် … ဘာလို့ … ဒါတွေ လာပြောနေတာလဲဟင် … စန္ဒီ့အသည်းတွေ ကွဲသွားစေချင်တာလား …
“သူ့နာမည်က … စန္ဒီတဲ့”
“ကိုနော် … စန္ဒီ့ကို … အဲဒီလို မနောက်နဲ့ … စန္ဒီ အရမ်းဝမ်းနည်းတယ်”
စန္ဒီ … သက်နိုင်ကို မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး … ခပ်စူးစူးလေး ကြည့်လိုက်သည် … သက်နိုင် … တဟားဟားနဲ့ ရီတာကို ကြည့်ပြီး … မျက်ရည်တွေကျလာသည် …
သက်နိုင် … လန့်သွားသည် … စန္ဒီ့ကို စတာ လွန်သွားသည် …
“အသည်းကလည်း … အရမ်းချစ်လို့ စတဲ့ဟာကို … ကိုယ် ကျိန်ပြောရဲပါတယ်ကွာ … စန္ဒီ့ကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိတယ် … စန္ဒီဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်ဦး … စန္ဒီ့ရှေ့မှာလည်း … တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး … နောက်လည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး … စန္ဒီ့ကိုပဲ ချစ်မယ် … အရမ်းချစ်မယ် … ဟုတ်ပြီလား … ငိုနဲ့တော့နော် … တိတ်တိတ်”
သက်နိုင် … စန္ဒီ့ မျက်ရည်တွေကို သုတ်ပေးရင်း … ချော့လိုက်သည် …
“ကိုနော် … စန္ဒီ့ကို … အဲဒီလို မစရဘူးနော် … စန္ဒီ အရမ်းဝမ်းနည်းတယ် … သိလား”
“အင်းပါ … ချစ်ရယ် … အင်းပါ”
သက်နိုင် … ဝမ်းနည်းနေတဲ့ စန္ဒီ့နှုတ်ခမ်းနုနုလေးကို … ဖမ်းငုံပစ်လိုက်သည် … စကားတွေ အများကြီးပြောမနေပါနဲ့တော့ … အသည်းရယ် … အချိန်တွေက နှမြောစရာကြီး … ချစ်သူအသစ်လေးကို … ချစ်ချင်တယ် … စန္ဒီ့နှုတ်ခမ်းလေးက … ပိုချိုလာတယ်လို့ … ခံစားရသည် … သက်နိုင် … စန္ဒီ့ပန်းလေးကို … အသာအယာ ပွတ်ပေးရင်း … လျှာလေးကို … စန္ဒီ့နှုတ်ခမ်းကြားထဲထည့်လိုက်သည် … စန္ဒီကလည်း … တုံ့ပြန်ပါသည် … သူ့လျှာလေးနဲ့ … ပြန်ကလိသည် … အောက်မှာ ပန်းလေးကို ကိုင်ရတာ အဆင်မပြေ … ပေါင်ကို ကြုံ့ထားတော့ … အကွဲကြောင်းလေးကို … ပွတ်ရခက်နေသည် … စန္ဒီက အလိုက်သိပါသည် … ပေါင်လေးကို မသိမသာလေး ကားပေးလိုက်သည် … လက်လေးက … အကွဲကြောင်းလေးကို .. စမ်းလို့ရပြီ … သေချာပွတ်ပေးရင်း … သက်နိုင် စိတ်တွေ အရမ်းထန်လာသည် … စန္ဒီ့ပန်းလေးကလည်း … ခုနက ပြီးထားတော့ … ချစ်ရည်တွေ အိုင်နေသည် … ချောနေတော့ … ပိုပြီးကိုင်လို့ကောင်းသည် … ဘေးနှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက … စန္ဒီ စိတ်ကြွနေလို့ ထင်ပါရဲ့ … ခပ်ထူထူလေး … တင်းနေသည် … စန္ဒီ … လျှာလေးက … သက်နိုင်ကို မထိတထိ … စသည် … သက်နိုင် … အသည်းယားလာသည် … နှုတ်ခမ်းချင်း … တေ့ကာ … စုပ်ပစ်လိုက်သည် … စန္ဒီလက်ကလေးနှစ်ဖက်က … သက်နိုင်ကို သိမ်းကြုံးဖက်ထားသည် …
သက်နိုင် … စန္ဒီ့ နှုတ်ခမ်းလေး … နမ်းနေရာကနေ … လည်တိုင်လေးကို … နမ်းလိုက်သည် …
“အို … ကိုရယ် … ဟာ … ရှီ … ရှီး”
စန္ဒီ့ပန်းလေးကို … ပွတ်ပေးတော့ … ပန်းလေးထဲက … ချစ်ရည်လေးများ … စိမ့်ထွက်လာပြန်သည် …
“အသည်း … ချွတ်လိုက်တော့နော်”
စန္ဒီ … မငြိုမငြင်ပဲ … စကဒ်လေးကို ချွတ်ပေးလိုက်မိသည် … စိတ်က … ချစ်သူကို အလိုလိုက်ချင်နေသည် … ရှက်ပေမယ့် … ချစ်သူ ငြိုငြင်မှာကိုမလိုလား … တတ်နိုင်သလောက် လိုက်လျောလိုက်ချင်သည် … မျက်စောင်လေးထိုးပြီး …
“စန္ဒီ့ကိုကျတော့ … အကုန်ချွတ်ခိုင်းတယ် … သူလည်း … အကုန်ချွတ်”
“ဟုတ်ကဲ့ … ဆရာမ”
“ခစ် … ခစ်”
ခုနကတုန်းက … ငိုတယ် … အခုတော့ ရီတယ် … စန္ဒီလေး တစ်ယောက်ကတော့ … ခက်တော့တာပဲ … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် … သူပျော်ရင် ပြီးတာပါပဲ … သက်နိုင် … တီရှပ်ကို ချွတ်သည် … သက်နိုင်က … ငယ်ငယ်ကတည်းက … အလေးမတာမို့ … ကြွက်သားတွေက သူ့နေရာနဲ့ သူ … တောင့်တောင့်တင်းတင်းရှိသည် … ဗိုက်မှာ … ဗယ်လီတုံးလေး ခြောက်တုံးက … အစီအရီ … စန္ဒီ … ဗယ်လီတုံးတွေကို ကြည့်ပြီး … သဘောကျနေသည် … ပြုံးနေသည် …
သက်နိုင် … ဘောင်းဘီချွတ်ဖို့ … ခုတင်အောက်ကို ဆင်းလိုက်သည် … စန္ဒီလိုက်ကြည့်နေသည် … သက်နိုင်ဘောင်းဘီ
ကြယ်သီးကို … ကိုင်လိုက်သည် … စန္ဒီ … သေချာကြည့်နေပါသည် … မျက်နှာလွှဲမသွား … ဘောင်းဘီထဲက … ထွက်လာမည့် အရာကို … သူ သိချင်နေသည် … စိတ်ဝင်စားနေသည် … သက်နိုင် ဘောင်းဘီ ချွတ်ပစ်လိုက်ပါသည် … အထဲက … ညီလေးက … ထောင်မတ်နေသည် … မဖြစ်ပဲခံနိုင်ရိုးလား … အရမ်းလှတဲ့ … အပျိုလေးနဲ့ … ချစ်တင်းနှောနေတဲ့အချိန်မှာ … ဖြစ်ပြီပေါ့ … သက်နိုင် … ဒုတ်က … မသေးပါ … ၇ လက်မကျော်တော့ ရှိမည် … သိပ်တော့ စန္ဒီ့အတွက်တော့ … အတော်ကြီးပေလိမ့်မည် …
“ဟင် … အကြီးကြီးပဲနော်”
စန္ဒီ … နည်းနည်းတော့ လန့်သွားသည် … ပထမဆုံး ယောက်ျားလေး အင်္ဂါကို … နှဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ မြင်လိုက်ရတော့ … တုန်နေတဲ့ ရင်တွေ … ပိုခုန်သွားသည် …
“အသည်း … ကိုင်ကြည့်ပါလား”
“ဟင့်အင်း … နည်းတာကြီး မဟုတ်ဘူး … စန္ဒီ ကြောက်လာပြီ”
သက်နိုင် … မွေ့ယာပေါ်တက်လိုက်သည် … ဒူးထောက်ပြီး စန္ဒီ့ရှေ့မှာ ရပ်လိုက်တော့ … ကိုယ်တောချောက … ချစ်သူမျက်နှာရှေ့မှာ တဝဲလည်လည် … ထောင်မတ်နေသည် … စန္ဒီက … ကြောက်တယ်သာ ပြောတာ … အကြည့်က မခွာတော့ …
“ကြောက်နေပြီလား … အသည်း”
သက်နိုင် … လက်နက်နဲ့ ချိန်းမခြောက်ချင်တော့ … စန္ဒီ့ကို ဖက်ပြီး လှဲချလိုက်သည် … တဇတ်ဇတ်တုန်နေတဲ့ … စန္ဒီ့ နှုတ်ခမ်းလေးကို … သက်နိုင် ငုံပြီး နမ်းပစ်လိုက်သည် … တဖြေးဖြေးနဲ့ … စန္ဒီ့ကိုယ်ပေါ်ကို … သက်နိုင် ရောက်သွားသည် … စန္ဒီ့ပေါင်ကြားထဲမှာ … နေရာယူလိုက်သည် …
စန္ဒီ့နို့လေးကို … ငုံပြီး … စုပ်ပေးလိုက်တော့ … စန္ဒီ့ရင်လေး ကော့လာသည် … ပါးစပ်ကလည်း … ဟင်းဟင်းဟင်းနဲ့ ငြီးသည် … အောက်မှာ … သက်နိုင် ပစ္စည်းက … ဝင်ပေါက်ရှာဖို့ … ဟိုထောက် ဒီထောက်လုပ်နေသည် … ဘယ်ဝင်မလဲ … အပျိုလေးမို့ … အကွဲကြောင်းက စိနေတာများ … ကော်နဲ့ ကပ်ထားသလား အောက်မေ့ရသည် …
သက်နိုင် … အသက်အောင့်ပြီး … ဒစ်ဖျားလေးနဲ့ … အကွဲကြောင်းကို လျှောက်ရှာမိသည် … မတွေ့ပါ … ထင်သည့်နေရာကလည်း မဟုတ် … ချော်ချော်ထွက်သွားသည် … သက်နိုင် စိတ်မရှည်တော့ … လက်နဲ့ ကိုင်ပြီး … အကွဲကြောင်းဝလေးကို တေ့လိုက်သည် … ဒစ်ဖျားလေးနဲ့ … ဖိလိုက်တော့ … အဝက နှုတ်ခမ်းနုလေးနှစ်ခုက ဘေးကို နည်းနည်း ဟသွားသည် … နုဖတ်တဲ့ အထိအတွေ့က … ကောင်းလိုက်တာ … သက်နိုင် ဖီလင်တက်ပြီး … ရှီးကနဲ အသံမြည်သွားသည် … အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် … အပေါ်အောက်ကို … ဒစ်ဖျားလေးနဲ့ … ဖိပြီး ပွတ်လိုက်တော့ … စန္ဒီ … လူးလွန့်သွားသည် … လက်ကလေးနှစ်ဖက်က … ရေနစ်သူပမာ … ခေါင်းအုံးလေးကို … တင်းတင်းဆုပ်ထားပြီး … တိုးဝင်လာမယ့် … သက်နိုင်ညီလေးကို … ကြိုဆိုနေတော့သည် … ကောင်းလိုက်တာ … စန္ဒီရယ် … သက်နိုင် ဒစ်ဖျားလေးကို … နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ခဲထားသလိုပဲ … တင်းပြီး အဝင်ရခက်အောင် … တားထားသည် … အထဲကို နည်းနည်းလေးဝင်အောင် … အားစိုက်ထည့်လိုက်တော့ … စန္ဒီ့နှုတ်ခမ်းလေးက … အင့်ကနဲ အသံထွက်လာသည် … သက်နိုင် … စိတ်ကို တင်းပြီး … ဖြေးဖြေးလေး ပြန်ထုတ်သည် … ဒီလိုထုတ်တော့လည်း … စန္ဒီ့ပန်းလေးက … လက်မခံချင် … အတင်း ဖမ်းဆုပ်ထားသည် … ခက်တော့တာပဲ … ဝင်တော့လည်း ပေးမဝင်ချင် … ထွက်တော့လည်း ပေးမထွက်ချင် … သက်နိုင် … နောက်တကြိမ် … သွေးတိုးစမ်းတဲ့အနေနဲ့ … ပိုပြီး ထည့်လိုက်သည် … လက်နှစ်ဆစ်ခန့် ဝင်သွားတော့ … စန္ဒီ မခံနိုင်တော့ …
“အား … ကိုရယ် … နာတယ်နော် … ဖြေးဖြေးနော် … စန္ဒီ … အရမ်းကြောက်တယ်နော်”
ချစ်သူရဲ့ ငြီးသံက … ငြင်းသံလား … ဆက်လုပ်ဖို့ … တိုက်တွန်းနေတာလား … မသဲကွဲ … သမိုင်းပေးတာဝန်အရ … ဆက်ထည့်ဖို့ပဲ ရှိသည် … သက်နိုင် ဒစ်ဖျားက … စန္ဒီ့ အပျိုမြှေးလေးကို … တံခါးခေါက်နေသည် … သက်နိုင် … အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှူကာ … ခါးမှာ အားထည့်ပြီး … ဆတ်ကနဲ … ဖိချပစ်လိုက်သည် … ကောင်းလိုက်တာ စန္ဒီရယ် … သက်နိုင် … ဒစ်လေးက … သိမ့်ကနဲ … အထဲကို ကျွံဝင်သွားသည် … ပါကင်ပေါက်သွားပြီ … စန္ဒီ့ အပျိုမြှေးဆိုတာ ပေါက်သွားသည် … စန္ဒီကတော့ … ဆတ်ဆတ်ခါနာသွားတယ် ထင်ပါရဲ့ … တစ်ကိုယ်လုံး ထွန့်ထွန့်လူးနေသည် … နှစ်ကိုယ်ကြား ငြီးသံလေးကလည်း သနားစရာ …
“အို … အား … နာတယ် … နာတယ် … ကိုရယ် … ရက်စက်လိုက်တာ”
သက်နိုင် … ညီလေး လှုပ်မရတော့ … စန္ဒီ့ပန်းလေးက … အတင်းတိုးဝင်လာတော့ … နာလွန်းလို့ထင်ပါရဲ့ … အတင်းညှစ်ထားသည် … သက်နိုင် … အတင်း … စန္ဒီ့နှုတ်ခမ်းလေးကို … နမ်းလိုက် … နို့လေးကို စို့လိုက်နဲ့ … လုပ်တော့မှ … နည်းနည်း ငြိမ်သွားသည် …
“ဟင့် … နာတာပေါ့ … ကိုက … သိပ်ရက်စက်တာပဲ … ရှီး … စန္ဒီ့အသည်းခိုက်အောင် … နာတယ် … အို အို … ပြောနေတဲ့ကြား … ဟာ …. ရှီး … ဟင့် … ဟင့် … ဟင့်”
သက်နိုင် … စန္ဒီ့ငြီးသံလေးကြောင့် … မြန်မြန်ထုတ်ပြီး … ခပ်သွက်သွက် … ပြန်ထည့်လိုက်သည် … သက်နိုင် … အသွင်းအထုတ်ကို … ခပ်သွက်သွက် လုပ်လို့မရ … ပြန်ထုတ်ရင် … စန္ဒီ့ပန်းလေးက … အတင်းညှစ်ထားတာမို့ … စန္ဒီ့ခါးလေးက … ကော့ပြီးပါလာသည် … သက်နိုင် … အတင်း ပြန်ထည့်တော့လည်း … အတင်းညှစ်ထားပြန်သည် …
“အို … ကို … ဖြေးဖြေး …”
သက်နိုင်ရဲ့ … အသွင်းအထုတ်တိုင်းမှာ … စန္ဒီ တဟင်းဟင်းနဲ့ … ခံစားနေရသည် … မခံစားနိုင်သည့်အဆုံး … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို … သွားနဲ့ ကိုက်ကာ … ခါးကို ကော့ပေးလိုက်တော့သည် … သက်နိုင် အလိုက်သိပါသည် … စန္ဒီ့ကို ခပ်ဖြေးဖြေးလေး ညှောင့်ပေးနေရာကနေ … ခပ်ကြမ်းကြမ်းဆောင့်ပစ်လိုက်သည် … လက်နက်နဲ့ သတ္တဝါ သိပ်တော့ မမျှချင် … အပျိုလေးမို့ … ပန်းလေးက ကြပ်စီးနေသည် … သက်နိုင်ဒုတ် … အဝင်အထွက်ကြမ်းသည်ကို … မခံနိုင်သည့်ထင်ပါရဲ့ … အတင်းလိုက်ညှစ်ထားပါသည် … ဒီလိုမျိုးလေး လုပ်နေရင်းက …
“ဟာာာ … ဟာာာ … ဟင့် … ဟင့် … အွန် … ရှီး”
“ဟာာာ … ဟာာာ … အာာ … အာာာ …
“အို … ကို … ကို … ကို့ …”
စန္ဒီ … ချစ်သူ့အမည်ကို … တမ်းတမ်းတတ … ခေါ်ရင်း … သက်နိုင်ကို … ရှိသမျှအားဖြင့် ကျုံးပြီး ဖက်ထားတော့သည် … အောက်က ပန်းလေးကလည်း … ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ … သုံးချက်ဆက်တိုက် … ညှစ်ပေးပြီး … စန္ဒီ ပြီးသွားသည် … သက်နိုင် ဒုတ်ကို ညှစ်ထားတာများ … ပြုတ်တူနဲ့ ညှစ်ထားသလား ထင်ရသည် … တင်းပြီး စီးနေတာပဲ … သက်နိုင် မခံနိုင်တော့ … အားရအောင် … လေးငါးဆယ်ချက် … ဆောင့်ပြီး … ထိပ်ဖျားကနေ အရည်တွေ … စန္ဒီ့ပန်းလေးထဲ … ပန်းထည့်ပစ်လိုက်သည် …
“အာာ … ဟာာ … စန္ဒီ …. စန္ဒီ … ကောင်းလိုက်တာ … အသည်းရယ် … ကောင်းလိုက်တာ”
အော် အပျိုနဲ့ လူပျို … အရိုင်းလေးတွေ တွေ့ကြတော့ … ၀ါရင့်သဘာရင့်တွေလို … အကြာကြီး ထိန်းမထားနိုင် … ထိမိတယ် ထည့်မိတယ် … ဆိုရုံလေးနဲ့ … ပြီးချင်နေသည် … နောက်တော့လည်း … အဆင်ပြေသွားမှာပါ … အတွေ့အကြုံက သင်ပေးသွားမှာပေါ့ … အခန်းထဲမှာ … ချစ်သူနှစ်ဦး … ချစ်ရည်လူးပြီးသွားတော့ … စိတ်အစဉ်က … မူးမူးမေ့မေ့ … တိမ်ကြားမှာ ဝဲပျံရသလို … ငြိမ့်ကနဲ … သိမ့်ကနဲ … တသိမ့်သိမ့်နဲ့ ကြည်နူးနေကြသည် …
သက်နိုင် … ညီလေးကို … စန္ဒီ့ပန်းလေးထဲမှာ စိမ်ထားရင်း … ချစ်သူ နဖူးပေါ်က … ဆံပင်လေးကို … ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ … ပွတ်သပ်ပေးနေသည် … စန္ဒီ့ပန်းလေးထဲမှာတော့ … ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ … ချစ်ဝတ်ရည်တွေ ပြည့်နေတော့ … ညီလေးက အဆင်ချောနေသည် … သက်နိုင် … ရင်ထဲက ဆန္ဒတွေက မငြိမ်းသေး … ပြာအုပ်ခံထားရတဲ့ … မီးလို … ခဏလောက် ငြိမ်နေပေမယ့် … တောက်လောင်နေဆဲ … မီးဆိုတာမျိုးက … လောင်စာကုန်မှ ငြိမ်းသလို … ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ … သက်နိုင်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးအဖို့ … မောတယ်ဆိုတာ ခဏပါပဲ … ကာမ မီးလျံလောင်မြိုက်ဖို့ … ချစ်စွမ်းအင်တွေက အပြည့်ပါပဲ …
“အရမ်းကောင်းတာပဲနော် … အသည်းရယ်”
“ဟုတ်တယ် … ကိုရယ် … စန္ဒီ့ရင်ထဲမှာ တလpှပ်လှပ်နဲ့ … ဟိုးအမြင့်ကြီးကနေ … ပြုတ်ကျလာသလိုပဲနော်”
“အရမ်းချစ်တယ် … အသည်းရယ်”
“အတူတူပါပဲ ကိုရယ် … အတူတူပါပဲ”
“အသည်းဟာလေးက … အရမ်းကြပ်တယ်နော်”
“ကိုနော် … ကြပ်မှာပေါ့ … ကိုက ပထမဆုံး ထည့်တာကိုး … ကြပ်တာကို မကြိုက်ဘူးလားဟင်”
“ကြိုက်တာပေါ့ … အသည်းရယ် … ကိုက ပထမဆုံးဆိုတော့ … အသည်းကို ပိုချစ်ရတာပေါ့”
“ဟွန့် အပိုတွေ … ကို့ဟာက … အရမ်းကြီးတာကိုး”
“ကြီးတာပေါ့ … ကို စထည့်လိုက်တော့ … စန္ဒီ့ရင်မှာ စို့သွားတာပဲ … အသက်ကို ဘယ်နားက … ရှူကမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး … ကိုရယ်”
“အသက်ဘယ်လို ရှူရလဲ သိအောင် … ထပ်ချစ်ကြမယ်လေ … နော် … အသည်း”
“တော်ပါ … လူကိုလေ … အသည်း အသည်းနဲ့ … အတင်းပဲ … ”
“ဘယ်လို အတင်း လုပ်တာလဲ …”
“ဟွန့် … သူပဲ … အတင်းထည့်တာလေ”
သက်နိုင် … စန္ဒီ့ကို စရင်း … အောက်က ညီလေးကို … စန္ဒီ့ပန်းလေးထဲက … ထုတ်လိုက်ပြီး … ခပ်သွက်သွက် … ပြန်ထည့်လိုက်သည် …
“ဟာ … ကိုနော် … ဟင့်”
“အို … ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … ဟင့်”
သက်နိုင် … လုပ်ငန်းပြန်စနေပြီ … ချစ်သူနဲ့ … ချစ်တင်းတစ်ခါနှောထားတော့ … စန္ဒီ့ပန်းလေးက … ချစ်ဝတ်ရည်တွေနဲ့ … ပြည့်လျှံနေတော့ … အဝင်အထွက် အဆင်ချောနေပါသည် … ဒီတစ်ခါတော့ … အကြာကြီး ချစ်နိုင်အောင် … သက်နိုင် ကြိုးစားရမည် … ချစ်သူသစ်လေးရဲ့ ချစ်ပန်းလေးကို … ပထမဆုံး မွှေးမွှေးကြူခွင့်ရလိုက်တော့ … ပြန်စဉ်းစားရင်း … ရင်ထဲက … ရမက်မီးက ဟုန်းဟုန်းတောက်လာသည် … သက်နိုင် အားထည့်ကာ … အဆက်မပြတ်ဆောင့်တော့ … သက်နိုင် ရင်ခွင်ထဲက … စန္ဒီ … တဟင့်ဟင့်နဲ့ … ချစ်သူရဲ့ … ချစ်တေးသီသမျှကို … လိုက်လျောကာနေတော့သည် …
“ဟင့် … ဟင့် … ဟင့်”
သက်နိုင် … သုံးချက် ဆောင့်လိုက် … ခဏရပ်လိုက် … သုံးချက်ဆောင့်လိုက် … ခဏရပ်လိုက်နဲ့ … စန္ဒီ့ကို အချစ်သစ်တွေ သင်ပေးနေသည် … သက်နိုင် ဆောင့်လိုက်တိုင်း … စန္ဒီက …
“ဟင့် … ဟင့် … ဟင့်” နဲ့ ငြီးနေမိသည် … ကောင်းတာကိုး … စန္ဒီ့ပန်းလေးကလည်း … သက်နိုင်ညီလေးကို … မညှာတာ … အတင်း ဖမ်းဆုပ်နေသည် … ချစ်ရည်တွေကြောင့် … အထဲဝင်လာတဲ့ … ဒုတ်ချောင်းလေးက … ငရှဉ့်လိုပဲ … ဖမ်းရခက်နေသည် … ပြုတ်တူတစ်ချောင်းလို … ညှပ်ချင်ပေမယ့် … အဝင်အထွက်က သွက်တော့ … ခံစားရခက်သည် … စန္ဒီ … ခေါင်းလေး တယမ်းယမ်းနဲ့ … နောက်ဆုံးတော့ … အရှုံးပေးကာ … သက်နိုင်ကို … အားကုန်ဖက်ရင်း … သက်နိုင်ချစ်သမျှ … အလိုလိုက်နေပါသည် …
ဒီတစ်ချီမှာတော့ … သက်နိုင်မှာ … စန္ဒီ့ကို ချစ်ဖို့ … အားတွေပြည့်နေလားမသိ … စန္ဒီ့ ဂျိုင်းအောက်ကနေ လက်လျှိုကာ … ချစ်သူကို လှုပ်မရအောင် ဖက်ထားရင်း … အဆက်မပြတ်ဆောင့်နေမိသည် … သက်နိုင် … ဆောင့်မယ်ဆိုလည်း ဆောင့်ချင်စရာ … အောက်ကမွေ့ယာက ထူတော့ … သက်နိုင် … ဆောင့်လိုက်တိုင်း … အောက်ကနေ ပြန်ကန်ကန်တက်လာသည် … နောက် စန္ဒီ့ရဲ့ ပန်းလေး … သက်နိုင် … ဒုတ်ကို … ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားရင်း … အဝင်အထွက်မှန်သမျှကို … တဟင့်ဟင့်နဲ့ … ပင့်ပေးနေရှာသည် … စန္ဒီ … လှုပ်မရပါ … ခပ်ပြင်းပြင်း အဆက်မပြတ်ဆောင့်ခံရတော့ … အသက်ရှုရကြပ်လာသည် … ချစ်သူရဲ့ ဆောင့်ချက်များကို … မခံနိုင်တော့ … ခြေထောက်လေးကို … မြှောက်ထားရင်း … ပေါင်ကို ပိုကားပေးလိုက်မိပါသည် … သက်နိုင် … ဒုတ်ကလည်း … ပိုကြီးလာတယ် ထင်တယ် … ဟင့် … စန္ဒီ့ရဲ့ … ပန်းလေးထဲမှာတော့ … ကြပ်နေတာပဲ … သက်နိုင်ရဲ့ … အချစ်ကြမ်းကြမ်းအောက်မှာ … စန္ဒီကတော့ … မူးမူးမိန့်မိန့် … တလိမ့်လိမ့်နဲ့ … ရွှေရင်က ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက် ဖြစ်နေရှာသည် … သက်နိုင် … စန္ဒီ့ကို ချစ်ရတာ အားမရ … စန္ဒီ့ကို အတင်းဖက်ထားရင်းက … လွှတ်ပြီး … စန္ဒီ့လည်တိုင်လေးကို နမ်းပစ်လိုက်သည် …
“အို … ကိုရယ် … ဟင့် … ဟင့် … ဟင့်”
“မရတော့ဘူး … မရတော့ … စန္ဒီလေ … စန္ဒီ …”
ချစ်မြေပြင်ကို နှစ်နေရာဖွင့်တော့ … အောက်က ချစ်သူခမျာ … ခံရခက်အောင် … ကော့ပျံလန်နေသည် … ရွှေလည်တိုင်ကို အနမ်းခံလိုက်ရချိန်မှာ … စန္ဒီ့စိတ်တွေ ထိန်းမရတော့ … တင်ပါးက အစွမ်းကုန်ကော့ပေးလိုက်ပြီး … ပန်းလေးက အားကုန်သုံးကာ … ညှစ်ထားရင်း … ချစ်ဝတ်ရည်တွေကို … ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်ပါသည် …
“ဟင့် …. ဟင့် … ဟာာ”
စန္ဒီ … ပြီးသွားပြန်ပါပြီ … ချစ်ဝတ်ရည်တွေကို … ရွှဲရွှဲစိုကုန်လို့ … အပြင်ကို လျှံကျလာပြီး … ပေါင်ကြားက မွေ့ယာပေါ်ကို … စီးကျလာပါသည် … ဒါပေမယ့် … ချစ်လွန်းတဲ့ချစ်သူကတော့ … မပြီးနိုင် … မစီးနိုင် … ချစ်မိုးတွေ ဆွေနေသည် … ချစ်ပါ ကိုရယ် … ချစ်ပါ … အားရအောင် ချစ်ပါ …
ချစ်ရသူလေး … တစ်ချီပြီးသွားမှန်း … သက်နိုင် … သိပါသည် … ချစ်ပန်းလေးထဲကနေ … တဇက်ဇက်နဲ့ … ညှစ်ထားရင်း … ပူနွေးတဲ့ အထိအတွေ့က … ကောင်းလိုက်တာ … သက်နိုင် … ဆောင့်နေရင်း … စန္ဒီ့မျက်နှာလေးကို ကြည့်တော့ … အားရကျေနပ်တဲ့ … မျက်နှာလေးနဲ့ … သက်နိုင်ကို … ပြုံးကြည့်နေပါသည် …
“အရမ်းချစ်တယ်နော် … အသည်း”
“ချစ်တာပေါ့ … ကိုရယ် … ချစ်တာပေါ့”
“အသည်းကို … ခပ်ကြမ်းကြမ်းချစ်မယ်နော်”
“အို … ကိုရယ် … ချစ်ပါ … အားရအောင်သာ ချစ်ပါ … ကိုရယ်”
သက်နိုင် … စန္ဒီ့နှုတ်ခမ်းလေးကို … ဖိနမ်းပစ်လိုက်ပြီး … အလိုက်သိလွန်းတဲ့ချစ်သူလေးကို … ချစ်အနမ်းတွေ ပေးလိုက်သည် … အောက်ကလည်း … သက်နိုင် ညီလေးကို … အဝင်အထွက် ကြမ်းကြမ်းဆောင့်နေရာကနေ … တဆုံးဆွဲထုတ်ပစ်လိုက်သည် …
“အို … ကို့ … ဟင့် …”
စန္ဒီ့ ခါးလေးက … အမြန်လိုက်ကော့လိုက်ပြီး … သက်နိုင် … ညီလေးကို မလွတ်တမ်း … လိုက်ညှစ်ပါသည် … အော် … စန္ဒီ … စန္ဒီ … အချစ်အကြောင်း သူသိသွားတော့ … မလွှတ်နိုင်အောင် … ချစ်နေပြီပေါ့ … သက်နိုင် … အမြန် ထုတ်ပြီး … တဆုံး ပြန်ထည့်သည် … စန္ဒီ့တင်ပါးလေး … မွေ့ယာအောက်ကို မြုပ်သွားသည်အထိ … ဆောင့်ချပစ်လိုက်သည် … ဆောင့်ချက်က … နုနုငယ်ငယ်ချစ်သူအတွက် … ပြင်းလွန်းပါသည် …
“အာ … ဟာ … ကို့ … အရမ်းပဲ … ဟင့် …”
နောက်တစ်ချက် … တဆုံး … ထုတ်သည် … တဆုံး ထည့်သည် …
“အို … ကို … မရက်စက်နဲ့ကွာ … စန္ဒီ မခံနိုင် …”
စန္ဒီ ငြီးလို့မှ မဆုံးခင် … နောက်တစ်ချက် … တဆုံး … ထုတ်သည် … တဆုံး ထည့်သည် … စန္ဒီ မတတ်နိုင်တော့ … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို … ပြတ်ထွက်မတတ်ခဲထားရင်း … ချစ်သူရဲ့ အချစ်ကြမ်းကြမ်းကို … အံကြိတ်ကာ ခံနေရသည် … မခံနိုင် … စန္ဒီ မခံနိုင် … နားထင်က သွေးတွေတောင် တဒိန်းဒိန်းနဲ့ … ခေါင်းတောင် မူးလာသည် … အောက်ကပန်းလေးထဲကို … ဓါးထည့်ခံရသလိုပဲ … နာသည် … နာသည်ထက် … တစ်ချက်တစ်ချက် … သက်နိုင် … ဒုတ်ဖျားက … ဒ-်နဲ့ … တစ်ခုခုကို တိုက်မိသွားသည် ထင်သည် … လူက တုန်ကနဲ တုန်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားသည် … ပန်လေးထဲက … ချစ်ရည်တွေကလည်း … ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲ … အံကျလာသည် …
“ခဏလေးပါ … အသည်းရယ် … ဟာ … ဟာ … ဟာ”
သက်နိုင် … စန္ဒီ့ကို … အစွမ်းကုန် … ချစ်ရင်း … ထိပ်ဖျားက … တင်းကနဲ ဖြစ်သွားပြီး … အကြောတွေ တုံ့ဆိုင်းကုန်ပြီး … တဇတ်ဇတ်နဲ့ … ပြွတ်ကနဲ အရည်တွေ … ပက်ဖြန်းပစ်လိုက်သည် … ပြီးဆုံးခြင်း … ကျေနပ်ခြင်း … အားရခြင်း … ချစ်မြတ်နိုးခြင်း … ခံစားချက်များနဲ့ … ချစ်သူကို … ကြင်ကြင်နာနာလေး နမ်းပစ်လိုက်သည် … ချစ်ဦးသူလေးက … မျက်လုံးလေး မှိတ်ကာ … ငြိမ်နေသည် … သူလည်း မောရှာမပေ့ါ … သက်နိုင် … နောက်ဆုံးအချီ … အချစ်နည်းနည်း … ကြမ်းသွားသည် … သူ အချစ်ကြမ်းသမျှ … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ကာ … အံကြိတ်ပြီး … အချစ်ခံတော့ … အော် … ငါ့ကို သိပ်ချစ်ရှာပါလားလို့ … တွေးမိပြီး … ရင်ထဲမှာ အချစ်တွေ တိုးလို့ လာပါသည် … သက်နိုင် … ချစ်ဦးသူနဲ့ … ချစ်ရွက်လှေ … အစွမ်းကုန် ဖွင့်လိုက်တော့ … ရှိသမျှ အားတွေ ကုန်သွားပြီး … မျက်စိက မှေးလာသည် … သက်နိုင် … စန္ဒီကို့ ဖက်ပြီး … အိပ်ပျော်သွားသည် …
“ကို … ကိုရေ … ထတော့လေ … စန္ဒီ သွားရတော့မယ် …”
“ဟွန် … စန္ဒီက ဘယ်သွားမလို့လဲ”
“စန္ဒီ့ကို … သူတို့လာခေါ်နေကြပြီ”
“မသွားပါနဲ့ … စန္ဒီရယ် … ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်မှတ်လား”
“ချစ်ရင် မသွားပါနဲ့ … စန္ဒီရယ်”
“မရတော့ဘူး … ကိုရယ် … သွားရတော့မယ် … နောက်ဘဝကျမှ ဆုံတော့မယ်နော်”
“မသွားရဘူး … စန္ဒီ … မသွားရဘူး”
သက်နိုင် … စန္ဒီ့ကိုယ်လေးကို ဖက်ထားသည် … မရ … တဖြေးဖြေးနဲ့ … စန္ဒီ့ကိုယ်လေးက … လေပေါ်ကို လွင့်တက်လာရင်း … သက်နိုင်ကို … ပြုံးပြုံးလေး နှုတ်ဆက်သွားသည် …
“သွားပြီနော် … ကို … သွားပြီ”
သက်နိုင် … တစ်ယောက်ယောက်က … ဆောင့်နှိုးလိုက်လို့လားမသိ … လန့်ပြီး … နိုးလာသည် … အော် … ငါ အိမ်မက်တွေ မက်နေတာပဲ … လို့ တွေးမိပြီး … စိတ်သက်သာရာရသွားသည် … သက်နိုင်ဘေးမှာ … ချစ်သူလေးက … ပုံ့ပုံ့လေး … လှုပ်တောင်မလှုပ် … ကွေးကွေးလေး … အိပ်ပျော်နေသည် … အော် … ချစ်ဦးသူလေးခမျာ … သနားပါတယ် … သူ အချစ်ကြမ်းသမျှ … သည်းငြီးခံတော့ … ချစ်အလိုလိုက်ရှာသည် … သက်နိုင် … စန္ဒီ့ နဖူးလေးပေါ်က … ဆံပင်လေးကို … သပ်ပြီး … မွှေးမွှေးလေး ပေးလိုက်သည် … ဟင် … သက်နိုင် … စိတ်ထဲ ထင့်သွားသည် … စန္ဒီ့ကိုယ်လေးက ဘာလို့ အေးစက်နေတာလဲ … သက်နိုင် … စန္ဒီ့ရင်ဘတ်လေးကို … နားနဲ့ ကပ်ပြီး … နားထောင်ကြည့်ပြီး … ရင်တွေ စို့သွားသည် … နှလုံး မခုန်တော့ပါလား … ဒါဆို ဒါဆို … သက်နိုင် … ဘောင်းဘီကို အမြန်စွပ် … စန္ဒီ့ အင်္ကျီတွေကို အမြန်ဝတ်ပေးပြီး … အပြင်ကို အမြန် ပွေ့ချီပြီး …
“လုပ်ကြပါအုံးဗျာ … လုပ်ကြပါအုံး”
ဟိုတယ်က … ညဘက် တာဝန်ကျနေတဲ့ … ဝန်ထမ်းတွေ ပျာယာခပ်ပြီး … ဆရာဝန်ခေါ်တဲ့လူကခေါ် … အရေးပေါ် သူနာပြုနနည်းနဲ့ … အသက်ရှူအောင် … သက်နိုင်ကို လုပ်ခိုင်း … ဒါပေမယ့်ဗျာ … ကံကြမ္မာက ရက်စက်လွန်းပါတယ် … သက်နိုင် ရဲ့ အချစ်ဦး … စန္ဒီ … အရမ်းချစ်သော စန္ဒီ … အသက်မရှူတော့ … သေသွားပြီ … ဆရာဝန်ကတော့ သေချာစစ်ဆေးပြီး … စန္ဒီ … သေဆုံးသွားသည် ဟု … အတည်ပြုလိုက်သည် … သက်နိုင် … ရူးပြီ … ချစ်ရပါသော စန္ဒီ … ညကမှ … တွေ့တဲ့ အချစ်ဦး … ရူးရူးမူးမူးနဲ့ … အချစ်ကြမ်းလိုက်မိတာ … ငါ့ကြောင့် ငါ့ကြောင့် …
“စန္ဒီ … သေတာ … ငါ့ကြောင့် ငါ့ကြောင့်”
အချစ်ကြောင့် … မူး … အချစ်ကြောင့် ရူးကြတဲ့ လူတွေထဲမှာ … သက်နိုင်ဆိုသော တစ်ယောက်လည်း ပါပါတယ်လေ … သိပ်လှတဲ့ ကမ်းခြေလေးမှာ … အချစ်နတ်သမီးလေး စန္ဒီနဲ့ … တွေ့ဆုံ ချစ်ခွင့်ရပြီး … ချစ်ပင်လယ်ကို … ချစ်သူနှစ်ဦး … လက်ပစ်ကူးရင်း … အသည်းတစ်ခြမ်းမှာ … ဘဝတပါးကို … ခွဲခွာသွားတော့ … ကျန်ရစ်သူ … ကျွန်တော့်မှာ … ဝမ်းနည်းပက်လက် … တမ်းတမ်းတတ နဲ့ … သောင်ပြင်မှာ “စန္ဒီ” “စန္ဒီ” “စန္ဒီ” … ဆိုတဲ့ နာမည်ကို … ရေးခြစ်ရင်း … ကြေကွဲမျက်ရည်များနဲ့ … နောင်တရရင်း … အရူးတစ်ပိုင်း ဖြစ်နေရရှာလေတော့သည် …
တွေ့ မ ရှောင် ကြီး